မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: May 2010 “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
ထိုအခမ်းအနားတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ၀န်ထမ်းများ၏ သား/သမီး (၃၅) ဦး၊ ရက်ကွက်တွင်းရှိ ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသား/သူ (၃၅) ဦး၊ အနာကြီးရောဂါသည် မိသားစုဝင် ကျောင်းသူ/သားများ (၃၁) ဦးတို့ကိုလည်း ပညာသင်စရိတ်များ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့ လှူဒါန်းရာတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ၀န်ထမ်း သား၊သမီး ကျောင်းသား/သူများ အတွက် တစ်ဦးလျှင် (၅၀၀၀/-) ကျပ်ဖြင့် စုစုပေါင်း (၁၇၅၀၀၀/-) ကျပ်ကို မေတ္တာတံခွန်အသင်းမှ လှူဒါန်းခဲ့ပါကြောင်း သာဓု အနုမောဒနာ ခေါ်ဆိုနိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။Rest of your post
Posted by အာဇာနည် at 1:48 PM2comments
အာဇာနည် ဘလော့ခ်မှ ဒီဇိုင်းကိုမျိုးနှင့် စက်တင်ဘာ ထာဝရကို ဂုဏ်ယူမှတ်တမ်းတင်ပါသည်။
စက်တင်ဘာ ထာဝရ (ကဗျာ)
ပြည်သူတွေ ကိုယ့်ကိစ္စကို ပြသနာ ဖြေရှင်းနေသော်လည်း အဖမ်းခံနေရ.... အော် ( သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ရာဇ၀င်တွေလည်းရိုင်းခဲ့ ရပြီ) အဖိုးရယ်
တိုကင် အသုံးပြုသည့် မောင်တောမှ ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင် ၃၀ ကို ရဲက ခေါ်ယူ ထိန်းသိမ်း 5/31/2010 တာကလူး
Burmese kyat noteမြန်မာ နိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက် အစွန်ဆုံး စီးပွားရေး အရ အချက် အချာမြို့ ဖြစ်သည့် မောင်တောတွင် ငွေစက္ကူ အကြွေ ရှားပါး နေသည့် အတွက် ငွေစက္ကူ အစား တိုကင်ပြားများ ထုတ်လုပ် အသုံးပြုနေသည့် ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင် ၃၀ ကို ရဲက မနေ့က ခေါ်ယူ ထိန်းသိမ်း လိုက်သည်။
အမည်မဖေါ်လိုသူ စီးပွားရေး သမား တဦးက “ သူတို့ကို မနေ့က နံနက် ၁၀ နာရီခန့်မှာ မောင်တောရဲစခန်းမှာ တိုကင် ကိစ္စ ဆွေးနွေးစရာ ရှိတယ်ဆိုပီး ခေါ်ယူကာ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကတော့ စစ်ဆေးမေးမြန်းမူတွေ လုပ်တယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ရုံးတင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။
မောင်တောမြို့တွင် ငွေအကြွေ အထူး ရှားပါးနေသဖြင့် ၂၀၀ ကျပ်တန်၊ ၁၀၀ ကျပ်တန်နှင့် ၅၀ ကျပ်တန်အစား တိုကင် ငွေစက္ကူများကို ဈေးဆိုင် ပိုင်ရှင်များက ရိုက်နှိပ် ထုတ်လုပ်ကာ သုံးစွဲ နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“ခုလို အသုံးပြုနေတာကတော့ ဈေးဆိုင်တွေရော၊ ဈေးဝယ် သူတွေပါ အဆင်ပြေတဲ့ အတွက် နားလည်မူနဲ့ တိုကင်တွေ ကို ရိုက်နှိပ် သုံးစွဲနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုကင်တွေမှာ ဈေးဆိုင် နာမည်နဲ့ ငွေကြေးတန်ဖိုးကို ရိုက်နှိပ်ထားတယ်။ အဲဒီ တိုကင်တွေနဲ့ မောင်တောမြို့အတွင်းမှာ ဈေးဝယ်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
Burmese kyat noteရဲက ခေါ်ယူ ထိန်းသိမ်း ခံရသူများထဲတွင် ဖြ်ိုးလဘက်ရည် ဆိုင်ပိုင်ရှင်၊ ရွှေနှင်းဆီ လဘက်ရည်ဆိုင် ပိုင်ရှင်၊ ခိုင်ထွန်း စားသောက်ကုန် ဆိုင်ပိုင်ရှင်၊ စေတနာ စတိုး ဆိုင်ပိုင်ရှင်၊ စန်းသီဟ လဘက်ရည် ဆိုင်ပိုင်ရှင်၊ ရွှေပျံလွှား ပိုင်ရှင်နှင့် ပိတောက်ရိပ် စတိုးဆိုင် ပိုင်ရှင်များ ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ တိုကင် ပြဿနာ တက်လာခြင်းမှာ မောင်တော မြို့မဈေးရှိ မာမတ်ဆောယော့ဒ် အထည်ဆိုင်၊ အာဘူတာဟေ စားကုန်ဆိုင်၊ ခိုင်ထွန်း စားကုန်ဆိုင်၊ ရပ်ကွက် (၂) မှ ကော်ရိမ္မူလာ ကုန်စုံဆိုင်၊ ရပ်ကွက် (၄) မှ ဖိနပ်ဆိုင်၊ ဇီးကာဖီ လဘက်ရည်ဆိုင်၊ ဖြိုးလဘက်ရည်ဆိုင်၊ စမ်းသီဟ လဘက်ရည်ဆိုင်တို့မှ ထုတ်ပေး ထားသည့် တိုကင်များနှင့် အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်ရှိ အောင်ဝင်း ဆိပ်ကမ်း အကောက်အဖွဲ့မှ ထုတ်ပေးသည့် ၀ိမလ တိုကင်များကို ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ပေးထားသူများမှ လက်ခံရန် ငြင်းဆိုခဲ့ရာမှ စတင် ဖြစ်ပွား လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မောင်တော မြို့နယ် အတွင်း လက်ရှိ လည်ပတ်နေသည့် တိုကင်ငွေ တန်ဖိုး စုစုပေါင်းမှာ ကျပ်သိန်း ၅၀၀ နီးပါးဖိုးခန့် ရှိုပြီး လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာကတည်းကပင် တိုကင်ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြု နေကြကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အာဏာပိုင်များက တိုကင် ထုတ်ပေးသူ ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်များကို ဖမ်းဆီးသည်သာမက ယခုအခါ တိုကင် သုံးစွဲခွင့်ကိုပါ ရုတ်တရက် ပိတ်ပင် လိုက်ခြင်းကြောင့် ပြသနာများ ပိုမို ရှုပ်ထွေးသွားပြီး ဆင်းရဲသား ပြည်သူများကို နစ်နာမူ ဖြစ်စေသည်ဟု မြို့လူကြီး တစ်ဦးက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
Burmese kyat note“ပြသနာရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို အရင် မရှင်းပဲ ဒီလို ရုတ်တရက် ပိတ်ပင် လိုက်တာဟာ ပြသနာတွေကို ပိုမို ရှုပ်ထွေးသွားအောင် လုပ်လိုက်တာနဲ့ တူတယ်။ ဒီတိုကင်တွေ လည်ပတ်နေတာ ကြာပီဆိုတော့ ဒီလို ပိတ်လိုက်တာဟာ သာမန် ဆင်းရဲသား ပြည်သူတွေကို ထိခိုက်နစ်နာသွားအောင် လုပ်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အများကတော့ ခုလို လုပ်လိုက်တဲ့ အပေါ် အထူး မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာ နအဖ စစ်အစိုးရ အနေဖြင့် ငွေအကြွေ စက္ကူ ရှားပါးနေသဖြင့် ပြည်သူများ ဈေးဝယ် ဈေးသုံးရာတွင် လွယ်ကူချော့မွေ့နိုင်ရေး အတွက် အစိုးရဘဏ်များမှ တဆင့် ငွေကြွေ အသစ်များကို လှဲလှယ် ထုတ်ပေးနေကြောင်း ကျေညာသော်လည်း မောင်တောမြို့ အပါအ၀င် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ထုတ်ပေး လှဲလှယ် ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခု ဖမ်းဆီးမူကို မောင်တောခရိုင် ဥက္ကဌသစ် ထွန်းနိုင်လင်း အမိန့်အရ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နယ်စပ်ဒေသ မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း အာဏာပိုင်များက ယခုကဲ့သို့ ပုဂ္ဂလိက ငွေတိုကင်များကို ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးနောက် ငွေအကြွေ လည်ပတ်မှုရှိလာစေရန် မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ် ဒေသ ဌာနခွဲမှ အာမခံ တိုကင်များကို များမကြာမှီ ထုတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်။ Rest of your post
ကျွန်တော့လက်ထဲရောက်လာလို့ဓါတ်ပုံအမြန်ရိုက်ပြီး အင်တာနက်ကနေတင်လိုက်ပါသည်။
Posted by အာဇာနည် at 12:56 PM0comments
ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုသည် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို မြေမြုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို
ရိုးမ ၃။ ၃၀၊ ၅၊ ၂၀၁၀
ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုသည် စစ်အစိုးရအနေဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို အပြီးအပိုင် မြေမြုပ်လိုက်ပြီး နိုင်ငံတော် ရာဇဝတ်မှုများကို ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်မြင့်ထွန်းက ပြောသည်။
ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု (၇) နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“နအဖ စစ်အုပ်စုရဲ့ ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုဟာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတင်မက နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုလည်း ဖြစ်ပြီး တကယ့်ရာဇဝတ်မှုကို ကျူးလွန်တာဖြစ်လို့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ သေချာဖော်ထုတ်ပြီး တရားစွဲဆိုဖို့ ညီညီညွှတ်ညွှတ် လုပ်ဆောင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ထို့အပြင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည့် မကွေးတိုင်း၊ မင်းလှမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးချစ်တင်၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန်းစန်းတို့က ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှုအဖြစ်အပျက်များကို ပြန်လည် ပြောခဲ့ကြသည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ စည်းရုံးရေးခရီးသွားသည့် မော်တော်ယာဉ်တန်းကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၀ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒီပဲယင်းမြို့ပြင် ကျဉ်ရွာအနီး၌ တုတ်၊ ဓား၊ လက်နက်မျိုးစုံ ကိုင်ဆောင်စောင့်ဆိုင်းနေသော စစ်အာဏာပိုင်များ ဦးဆောင်သည့်အုပ်စုက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါလုပ်ကြံမှုအပြီး စစ်အစိုးရက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားရာ လူ ၄ ဦးသေဆုံးပြီး (၅၀) ခန့်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း မျက်မြင်သက်သေများက ပြောဆိုရာတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ အပါအဝင် လူပေါင်း ရာနဲ့ချီသေဆုံးခဲ့သည်ဟု ပြောသည်။
ယင်းလုပ်ကြံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းတို့မှ ၉၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၇၀)ဦးက ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ကိုဖီအာနံ ထံ ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ပေးရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေထံသို့ လိပ်မူ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုအပြီး ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူများ ပြန်လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆို ခဲ့သော်လည်း စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ယနေ့အထိ တစုံတရာ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
ယနေ့ပြုလုပ်သည့် ဒီပဲယင်းအမှတ်တရ အခမ်းအနားကို လူထုတိုက်ပွဲ ကော်မတီက ဦးဆောင်၍ အဆိုပါ လုပ်ကြံမှုအတွင်း သေဆုံးခဲ့သူများကို ရည်စူး၍ သံဃာတော်များကို ဆွမ်းကပ်လှူပြီးနောက် ဒီပဲယင်းအဖြစ်ပျက် အမှတ်တရ စကားဝိုင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by ရိုးမ ၃ သတင်းဌာန at 5:56 PM Rest of your post
Posted by အာဇာနည် at 3:12 AM0comments
မောင်သာရ မေ ၃၀၊ ၂၀၁၀
သိတယ်နော် …၊ လွန်ခဲ့တဲ့လ ၂၀ ရက်နေ့ကတည်းက America ရဲ့ ကမ်းလွန်ရေနံတွင်းတတွင်းတူးရာက ပေါက်ကွဲမီးလောင်ပြီး နေ့စဉ် ရေနံစိမ်းဂါလံပေါင်း နှစ်သိန်းလေးသောင်း (အခုနောက်ဆုံး ခန့်မှန်းချက်က ငါးးသိန်း တသောင်း) ပင်လယ်ထဲ ယိုဖိတ်ပြန့်နှံ့ မျောပါနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလေ။
ရေနံစိမ်းတွေက ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ချောကလက်ပျော့ကြီးလို လေးလက္မထုလောက်ရှိနေပြီး လေနဲ့လှိုင်းနဲ့ ရေစီးကြောင်းနဲ့အတူ အမေရိကားရဲ့ ကမ်းရိုးတန်းပြည်နယ် သုံးပြည်နယ်ရဲ့ ကမ်းခြေနေ ပြည်သူတွေနဲ့ ရေလုပ်ငန်းတွေကို ဒုက္ခပေးတော့မယ်။ ပေးစလည်း ပြုနေပြီတဲ့။ ပင်လယ်ငါးပုဇွန်ဖမ်းလုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေကြရတဲ့ ရေလုပ်သားပေါင်း လေးသန်းကျော်ရဲ့ စားဝတ်နေရေးဘဝတွေလည်း ထိခိုက်တော့မယ် တဲ့။
အခုပဲ ဆိုင်ရာက လူဝီးဆီးယားနား ပြည်နယ်၊ New Orleans မြို့တောင်ဘက် Grand Isle ကျွန်း ပတ်လည်ရေပြင် စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၄ သောင်း ၆ ထောင်မှာ ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ပိတ်လိုက်ပြီ။ သည်လုပ်ကွက်အကျယ်အဝန်းဟာ ငါးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရဲ့ ၁၉% ရှိသတဲ့။ တာဝန်ရှိတဲ့ BP ရေနံကုမ္ပဏီနဲ့ အမေရိကန် ကမ်းခြေစောင့် တပ်တွေ၊ ရေတပ် အင်ဂျင်နီယာတပ်တွေကလည်း မျောပါချည်းကပ်လာနေတဲ့ ရေနံစိမ်းထုတွေ ကမ်းခြေပေါ် ရောက်မလာရေးအတွက် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားကာကွယ်ခဲ့ကြ၊ ကြိုးစားကာကွယ်နေကြဆဲပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ပင်လယ်ရေပြင်ဆိုတာ သင်ဖြူးခင်းထားသလို ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ၊ ဒါတောင် ကံကောင်းထောက်မပြီး hurricane မုန်တိုင်းရာသီနဲ့ မကြုံကြိုက်ပေလို့။ (မုန်တိုင်းရာသီက အခု ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့က နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ။ ဒီနှစ် အတ္တလန်တိတ်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းပေါင်း ၁၄ ခု တိုက်ခတ်မယ်လို့ မိုးလေ၀သဌာနက ခန့်မှန်းကြေညာပြီ။) ဘာပဲပြောပြော ပြဿနာက အဓိက အရင်းခံဖြစ်တဲ့ တနေ့ ရေနံစိမ်း ဂါလံပေါင်း ၅ သိန်းကျော် ယိုထွက်နေတဲ့ ပိုက်ပေါက်တွေကို ခုထက်ထိ မပိတ်ဆို့နိုင်ကြသေးတာပဲ။ ခက်နေတာက ရေနံတွင်းဝရှိရာမြေပြင်က ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက် တမိုင်နဲ့ ၂ ဖာလုံမှာ။
အဲသည်ကနေ ရေနံတူးစင်ကြီးဆောက်ပြီး ရေပြင်ပေါ်ကနေ ပိုက်တွေဆက်ယူ တူးနေတာ။ တူးစင် Rigs ဆောက်တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံက Transocean ကုမ္မဏီကို BP (British Petroleum (America)) ရေနံကုမ္ပဏီက တာဝန်ပေးဆောက်ခိုင်းထားတာ။ ဆိုတော့ တွင်းဝကနေ ရေပြင်ပေါ်အထိ တက်လာရတဲ့ တွင်းတူးပိုက်လုံး ဝန်ရိုးကြီးကိုက တမိုင်ကျော်ရှည်ပြီပေါ့။ ခက်တာက တန်ချိန်ပေါင်း ခန့်မှန်းခြေ ၁,၈၀၀ ကျော်လေးလံတဲ့ သည်ဧရာမ သံထည်တူးစင်ကြီးကလည်း ပေါက်ကွဲမီးလောင်ပြီး နောက်တနေ့မှာပဲ ရေထဲကို ကျိုး ခေါက် ပြို ကျသွားခဲ့တယ်လေ။ ဆိုတော့ ရေအောက်ကနေ တူးစင်ပေါ်အထိ တက်လာရတဲ့ ရေနံတူးရေနံစိမ်းပိုက်ကြီးကလည်း သူ့အပေါ် တူးစင်ကြီးပါ ပြိုလဲပိကျလာတော့ ခေါက် ကျိုး ပေါက် ပြဲကုန်ပြီပေါ့။ အဲဒီ ပိုက်ပေါက်ကနေ ရေနံစိမ်းတွေ ယိုထွက်လာနေတာပဲ။ ဒါကို ထောက်ချင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ပင်လယ်ရေအောက်မြေထဲက ထွက်လာမယ့် ရေနံပမာဏရဲ့ တွန်းကန်အားကို တူးစင်ပေါ်က ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေက ကြိုတင်တွက်ချက်မှုမှားပြီး မထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တာ ဖြစ်မယ်။ တူးနေတဲ့လွန်သွား သည်လို သဲလွှာရေနံကြောထဲရောက်နေပြီဆိုတာ ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေ မသိဘဲမနေပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ရေနံတူးနေခိုက် မြေအဝင်အနက် ၂ ပေ ရောက်တိုင်း ရောက်တိုင်းမှာ လွန်သွားထိတွေ့လာတဲ့ မြေလွှာရဲ့အခြေအနေနဲ့ ရေနံရှိနိုင် မရှိနိုင်ကို ၂၄ နာရီမပြတ် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ကြည့်နေရတာ ထုံးစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ … ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေရဲ့တာဝန်ပါ။ ရေနံတူးစင် တည်ဆောက်ထားရာနေရာတိုင်းမှာ ဘူမိဗေဒဓာတ်ခွဲခန်း lab တွေ တွဲရက်ရှိပါတယ်။ သီးသန့် air condition နဲ့ ဘာနဲ့ပါ။ တူးစင်ပေါ်မှာ သို့မဟုတ် ရေနံတူးရာမှာ ရေနံထုတ်လုပ်ရေးထုံးစံပေါ်လစီအရ ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေက အဓိက ဆုံးဖြတ် အမိန့်ပေးရတဲ့လူတွေပါ။ တွင်းတူးသမားတွေ၊ drilling engineer နဲ့ အလုပ်သမားတွေက ပေါ်လစီအရ လက်အောက်ခံပါ။ အခုလို မြေထဲက ရေနံသော်လည်းကောင်း၊ ရေသော်လည်းကောင်း၊ ဓာတ်ငွေ့သော်လည်းကောင်း တစုံတရာ တွန်းကန်အားပြင်းထန်လာပြီဆိုရင် … ဘူမိဗေဒရဲ့အလုပ်က ထုံးစံအတိုင်း အသင့်ဆောင်ထားတဲ့ ရွံ့မှုန့်အိတ်တွေ၊ ဘိလပ်မြေအိတ်တွေကို ရေနဲ့လိုသလို အကျဲအပြစ်ဖော်စပ်ပြီး တွင်းထဲကို အမြန်မောင်းလောင်းထည့် ထိန်းချုပ်ရပါတယ်။ ပင်လယ်ရေပြင်အောက် ရေနံတွင်းတွေက ကုန်းတွင်းမြေပေါ် ရေနံတွင်းတွေထက် အဆများစွာ ထွက်နှုန်းများလေ့ရှိတဲ့အတွက် လက်ဦးအစ မြေအောက်တွန်းကန်အား (initial outburst pressure)က ပိုပြင်းထန်တယ် ဆိုတာ ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေ ကောင်းကောင်း သိပါတယ်။ ပြီး မလှမ်းမကမ်းမှာ bp တကုမ္ပဏီထဲက ထုတ်လုပ်နေတဲ့ အလားတူ ရေနက်ပိုင်းတွင်း deep water horizon နှစ်တွင်းလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဆိုတော့ ခုလို တွန်းကန်အားကို ဖိနှိမ်မထားနိုင်လို့ ရေနံစိမ်းတွေ၊ ရေနံဓာတ်ငွေ့တွေ တူးစင်ပေါ်အထိ ပန်းတက်လာပြီး တူးစင်ပေါ်က တူးစက်အင်ဂျင်တွေ၊ လျှပ်စစ်မီးစက်အင်ဂျင်တွေနဲ့ ထိတွေ့ပေါက်ကွဲ မီးလောင်ရတာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း တူးစင်ပေါ်ကလူတွေအားလုံး လက်လွတ် ခုန်ချ ထွက်ပြေးကြရတာပေါ့။ ဒါတောင် ၁၁ ယောက် သေကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။
ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာလည်း ပြည်တောင်တန်းမှာတကြိမ်နဲ့ မန်း အစမ်းတွင်းတွေ တူးစဉ်ကာလကတကြိမ်… လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတွေ နည်းသေးတဲ့အတွက် သည်လို အဖြစ်ဆိုးမျိုး ဆုံးရှုံးရမှုမျိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုန်းတွင်းမြေပေါ် တွင်းတိမ်ကလေးတွေသာဖြစ်တဲ့အတွက် မြေအောက်တွန်းကန်အားကလည်း မပြင်းထန်တော့ အချိန်မီလည်း စက်တွေကို ပိတ်လိုက်နိုင် လူလည်း အသေအပျောက် မရှိခဲ့ပါဘူး။ ။ အဲ … ဗမာ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်က တူးစင်တခုမှာတော့ သည်လို မီးလောင်ပေါက်ကွဲ ဆုံးရှုံးရမှုမျိုးကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်တို့က နိုင်ငံခြား ရေနံကုမ္ပဏီတွေကို တင်ဒါခေါ် တူးခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေး၊ တူးရမယ့် နေရာသတ်မှတ်ပေး၊ ပေါ်လစီ policy ချပေးပြီး တူးခိုင်း … ပြီး … ရေနံထွက်လာခဲ့ရင် ရလာမယ့်အကျိုးအမြတ်အပေါ်မှာ ဗမာက ၅၁% တူးတဲ့ရေနံကုမ္ပဏီက ၄၉% စနစ်နဲ့ ခွဲဝေခံစားရေး သဘောတူစာချုပ်ချုပ် လုပ်ခဲ့ကြတာဆိုတော့ … ကျုပ်တို့ဘက်က ရေနံသိုက်လျှို့ဝှက်ချက် အနည်းငယ် သူတို့သိသွားရတာကလွဲလို့ ဘာမှ အဆုံးအရှုံး မရှိခဲ့ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားရေနံကုမ္ပဏီကလည်း အခြေအနေ မလှတာနဲ့တပြိုင်နက် ၄ နာရီလောက် အချိန်စောပြီး တူးစင်ကို စွန့်ခွာလာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမီးလောင်ပြီး ကျန်ရစ်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ တူးစက်တွေနဲ့ တူးစင်ကလည်း ထုံးစံအတိုင်း အာမခံထားရှိပြီးဖြစ်ကြတဲ့အတွက် ရေနံကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်း သိပ်ဆုံးရှုံးမယ် မထင်မိပါဘူး။ အမှတ်တရ … အဲသည်တုန်းက တူးစင်ကို နောက်ဆုံးမှ စွန့်ခွာလာခဲ့ကြသူတွေကတော့ ဥစ္စာရင်လို ဥစ္စာရင်ခဲ ခဲ့ကြတယ်။ ဗမာဘူမိဗေဒပညာရှင် တွေပါ။ အဲသည်တုန်းကလည်း ကျုပ်တို့ဗမာဘက်က နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကလည်း မဖြစ်၊ တဖက်ကလည်း ကိုယ်မတတ်လို့ ကိုယ်မနိုင်လို့ ဘိုင်ကြံ ကြံပြီး နိုင်ငံခြားရေနံကုမ္ပဏီကို မျှော်လင့်ချက်ပေး တူးခိုင်းရတာ ဆိုတော့ လက်ညှိုးထိုးလို့ကလည်း မဖြစ်၊ ဒီလိုနဲ့ ငြိမ်နေလိုက်ကြရတာပါပဲ။ လူထုကလည်း ဘာမှ မသိလိုက်ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗမာ့ရေနံလောကထဲမှာတော့ အများကြီးစကားပြောခဲ့ကြပါတယ်။ သင်ခန်းစာတွေလည်း အများကြီး ရလိုက်ပါတယ်။ တွင်းတူးရေနံကုမ္ပဏီသာ ဗမာဆိုရင် သည်လောက်အထိ လုပ်လာပြီးမှ သည်လိုဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေရဲ့ စကားကိုနားမထောင်ဘဲ စက်တွေကို အားလုံးရပ်ပြီး အလွယ်တကူ လက်လျော့ စွန့်ခွာပါ့မလားပေါ့။ ဥစ္စာရင်မဟုတ်လို့သာ မစွန့်စား မကြိုးပမ်းတာပေါ့ … စသဖြင့်ပေါ့။ တနည်းအားဖြင့်တော့ လက်ညှိုးထိုးတာပါပဲ။
အခု အမေရိကားမှာလည်း စကားတွေ ပွားနေကြပါပြီ။ တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ … အပြန်အလှန် လက်ညှိုးထိုးနေကြတာ နားကြားပြင်း ကပ်လာတော့ … သူ ဆက် သည်းမခံနိုင်ဘူးလို့ သမ္မတကလည်း အပြတ်ပြောပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဖွဲ့လိုက်ပါပြီ။ ကွန်ကရက်လွှတ်တော်ထဲမှာ စစ်ဆေးကြားနားနေကြပါပြီ။ ရေနံတွင်းတူး လိုင်စင်ချပေးတဲ့ဌာနနဲ့ ရေနံကုမ္ပဏီတွေနဲ့က cozy relationship ပလဲနံပသင့်ကြပါပေတယ် လို့ ပြောလိုက်တဲ့အတွက်လည်း တာဝန်ရှိတဲ့ Minerals Management Service Agency ရဲ့အကြီးအကဲ Interior Secretary Ken Salazar ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် သူ့ဌာနရဲ့ ပေါ့လျော့မှုပါလို့ ဝန်ခံပြီး ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်သွားပါပြီ။ ရေနံတူးတဲ့ bp ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌတို့၊ တူးစင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ transocean ကုမ္ပဏီရဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်တို့လည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ရှေ့မှောက်မှာ ရောက်နေကြပါပြီ။
ဒါပေမယ့် gulf of mexico ပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာတော့ ရေနံတွေက ဆက်လက်ယိုဖိတ် ပြန့်နှံ့နေဆဲပါပဲ။ နောက်ဆုံး သတင်းအရဆိုရင် ရေနံစိမ်းဂါလံပေါင်း ၁၁ သန်းကျော်နေပါပြီ တဲ့။ ပြီး အယ်လ်ဘားမား ပြည်နယ် dauphin ကျွန်းကနေ လူဝီဆီယားနားပြည်နယ် grand Isle ကျွန်းအထိ မိုင်ပေါင်း ၁၅၀ တိုင်တိုင် ရေနံစိမ်းတွေ ပြန့်နှံ့နေပါပြီ တဲ့။ ကမ်းရိုးတန်း ဒိုက်တောတွေမှာ နေကြတဲ့ ငှက်တွေလည်း ရေနံစိမ်းတွေလူးပြီး သေကြေပျက်စီး ကုန်ကြပါပြီ တဲ့။ အဲဒီပြည်နယ်ကမ်းရိုးတန်းတလျောက်က ကမ်းခြေရေဆိပ်တွေလည်း ဧည့်သည်လုံးဝမလာတော့ဘဲ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းကုန်ကြပါပြီ တဲ့။
သိတယ်နော် …၊ ရေနံစိမ်း ရေနံချေးဆိုတာ crude oil ဆီပဲလေ။ ဆီဆိုတာ ရေထက် သိပ်သည်းဆနည်းတော့ ပေါ့ပြီး ရေပေါ်မှာပဲ နေတာပေါ့။ ပြီး … မြေကြီးထဲက ရေနံဆိုတာကလည်း မြေလွှာ၊ ကျောက်လွှာ၊ ရေကြော၊ သဲကြောထဲမှာ သူချည့် သီးသန့် လိုဏ်ခေါင်းဖွဲ့နေကြတာမဟုတ်ဘူး။ သူ့သဘာဝက သဲကြောထဲမှာ သဲတွေက စုပ်ထားတဲ့အတွက် သဲတွေနဲ့ ရောနေတာ။ ဒါပေမယ့် သူ့အပေါ်က မဟာပထဝီမြေကြီးက ဘယ်လောက်ပဲ ဖိထားထား။ မြေလွှာ၊ ရေလွှာ၊ ကျောက်လွှာတွေကို ထိုးဖောက်ပြီးတော့ မြေပေါ် အလိုအလျောက် ပန်းထွက်မလာနိုင်ဘူး။ အဲဒါကို ရေနံတူးသူတွေက “လွန်”နဲ့ လှည့်တူးပြီး ထွက်ပေါက်လုပ်ပေးမှ ထွက်လာနိုင်တာ။ ဒါလည်း ရေနံခိုအောင်းနေတဲ့နေရာ၊ ရေနံသဲကြောကို သံမဏိပိုက်လုံးတွေ ဆင့်ဆင့်ပြီး လွန်ရိုးလုပ်တပ်ထားတဲ့ “စိန်လွန်သွား” ကြီးက တည့်တည့်မတ်မတ် ထောက်မိပါအုံးမှ။ တည့်တည့်မတ်မတ် ထောက်မိဖို့ဆိုတာကတော့ ရေနံဘူမိဗေဒပိုင်းရယ်၊ အနုမြူရောင်ခြည် ဘာသာရပ်ပိုင်းရယ်၊ ကံပိုင်းရယ်ပေါ့နော်…။ မမြင်ရတဲ့ မြေကြီးထဲက တီကောင်ကို မြေပေါ်က အပ်နဲ့စမ်းထောက်ရသလိုမျိုး။ မလွယ်တော့ မလွယ်လှပါဘူး။ ။
တချိန်က ကျုပ်တို့နိုင်ငံအတွက် ကမ်းလွန်ရေနံတွင်းတွေ တူးဖို့ဆိုပြီး ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရက တွင်း ၁၀ တွင်းစာ ကုန်ကျမယ့် ငွေကြေး ဒေါ်လာသန်း ဘယ်လောက်လဲမသိ ထောက်ကူခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်လို့ ရေနံထွက်လာခဲ့ရင် ဂျပန်နိုင်ငံကိုပဲ ကာလပေါက်ဈေးအတိုင်း ရောင်းပါ့မယ်ပေါ့။ ကတိစာချုပ်နဲ့လေ။ ဂျပန်နိုင်ငံက ရေနံလိုတယ်။ လက်ရှိ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေက ဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတာ ခရီးလမ်းကထောက်တော့ စားရိတ်အကုန်အကျ များတယ်ပေါ့။ အမယ် … အပို တတွင်းစာ ငွေတောင် လက်ဆောင်ထပ်ပေးလိုက်သေး။ အားလုံးပေါင်း ၁၁ တွင်းကို အမေရိကန် ရေနံတွင်းတူး ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ တူးတာ … ဘယ်မှာ ရေနံထွက်ခဲ့လို့တုန်း။
ဆိုလိုတာက ရေနံတူးတယ်ဆိုတာလည်း ကြေးကြီး လောင်းကစားနည်း တမျိုးပေါ့။ high roll gambling ပါပဲတဲ့။ ပြောစမှတ် ပြုကြတယ်။ အဲ … ရေနံထွက်ပြီဟေ့ဆိုရင်တော့ ထောပြီပဲ။ တွင်းဝကို ဘုံဘိုင်ခေါင်း တပ်၊ ပိတ်ထားလိုက်ပြီး လိုတဲ့အချိန်မှာ လိုသလောက်ထုတ်ယူပေတာ့။ ကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာကတော့ ပိတ်မထားနိုင်ပါဘူး။ စ ထွက်ပြီဆိုကတည်းက ထွက်သမျှ ရနိုင်သမျှကို နာရီစက္ကန့်မလပ် မရပ်မနား ထုတ်ယူနေရတာပဲ။ ဒါတောင် ပြည်တွင်းသုံးအတွက် မလောက်ဘူး။ ပြည်ပက သွင်းရသေးတယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့ ကုန်းတွင်း တွင်းတွေကလည်း တွင်းတိမ်လေးတွေဆိုတော့ သိပ် အထွက်မများပါဘူး။ အလွန်ဆုံးထွက်မှ တနေ့ ဆီပေပါ ၁၀၀ နဲ့ ၂၀၀ ကြားပေါ့။ ဒါတောင် စထွက်ထွက်ခြင်း ပန်းအားသန်တုန်း initial draw ရယ် … ။ နောက်ပိုင်းကျ လေးငါးဆယ်ထွက်ဖို့တောင် မောင်းတံနဲ့ စုပ်ယူရတယ်။ သည်နေရာမှာ ဗဟုသုတအဖြစ် ပြောရအုံးမယ်။
ပင်လယ်ရေပြင်အောက် ဓာတ်ငွေ့ရေနံတွင်းတွေက ရေနံထွက်တယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး တနေ့ စည်ပေပါ ထောင်ဂဏန်း၊ သောင်းဂဏန်းနဲ့ ချီ ထွက်လေ့ရှိတယ်။ BPD barrells par day လို့ သုံးတယ်။ အခု အမေရိကန်မှာ ပြဿနာတက်နေတဲ့ gulf of mexico ထဲက မီးလောင် ပေါက်ကွဲသွားရတဲ့ ရေနံတွင်းက ရေနံစိမ်းတွေ ယိုထွက်နေတာကိုပဲ ကြည့်။ တနေ့ ရေနံစိမ်းဂါလံပေါင်း ၅၄,၀၀၀၊ စည်ပေပါ တသောင်းကျော်ခန့် တဲ့။ တွင်းကလည်း ရေမျက်နှာပြင်အောက် ၁.၂ မိုင်အနက်က တွင်းကိုး …။ deep water horizon လို့ ခေါ်တယ်။
သည်နေရာမှာလည်း ဆန်းပြားတဲ့ ရေနံဘူမိဗေဒ ဗဟုသုတ တခု ပြောရဦးမယ်။ ရေနံထွက်နှုန်းကို ပြောပါတယ်။ ရေနံက မြေပုံမှာ (Longitude) လောင်တီကျုတွေနဲ့ မျဉ်းပြိုင်တည်နေတဲ့ ဒေါင်လိုက် ကမ်းရိုးတန်း (ဥပမာ … ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း၊ ဂျပန် ကမ်းရိုးတန်း) တွေရဲ့ ကမ်းလွန်ဒေသတွေမှာထက် … (Latitude) လတ္တီကျူတွေနဲ့ မျဉ်းပြိုင်တည်နေတဲ့ ကန့်လန့်ကမ်းရိုးတန်းတွေရဲ့ ကမ်းလွန်ဒေသတွေမှာက ပိုလည်း အထွက်များတယ်။ ထွက်ဖို့လည်း ပို သေချာတယ်။ အဲဒါ ရေနံရဲ့သဘာဝပဲ။ လက်တွေ့ကြည့်လေ။ gulf of Mexico, gulf of Alaska, Persian gulf, gulf of Oman ။ ရေနံ အလျှံပယ် ထွက်နေတဲ့ ပင်လယ်ကွေ့တွေပဲ။ ကမ္ဘာမြေပုံကို ပြန်ကြည့်။
ကျုပ်တို့ရဲ့ မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ (gulf of martadan) ကရော … ကန့်လန့်ကမ်းရိုးတန်း မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ရေနံဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေက ကျုပ်တို့ရဲ့မုတ္တမ ပင်လယ်ကွေ့ရဲ့ အောက်မှာ ရေနံအိုင်ကြီး ရှိတယ်လို့ တညီတညွတ်တည်း ဟောကိန်းထုတ် မျက်စေ့ကျနေကြတာပေါ့။ လက်တွေ့ အထောက်အထားတခုကလည်း ရှိနေတယ်လေ။ တွင်းတတွင်းက ရေနံဓာတ်ငွေ့တွေ အလျံပယ်ထွက်နေတယ် မဟုတ်လား။ ထိုင်းနိုင်ငံကို လက်လွှဲရောင်းစားနေတာကိုပဲ တနှစ်ဒေါ်လာ ၄ ဘီလီယံ ရတယ် ဆိုလားပဲ။
ဒါပေမယ့် နအဖ စစ်အစိုးရကလည်း ပါးပါတယ်။ လက်လွတ်စပယ် လုပ်မပစ်ပါဘူး။ တခုတော့ရှိတယ်။ သည်နှစ်က ပြည်တွင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုနှစ်လေ။ သူတို့အာဏာတည်မြဲအောင်၊ သူတို့ပဲ အနိုင်ရအောင် ပြည်သူလူထုကို အတိုင်းအတာ တခုအထိတော့ အကျိုးပြုပြရမယ် မဟုတ်လား။ ပြည်သူလူထု ချမ်းသာအောင် … ပြည်သူလူထုက ထောက်ခံလာအောင် ဒီ မုတ္တမကမ်းလွန် စုဗူးကြီးကို ဒီနှစ် ဖောက်ပြတော့မယ် ထင်ပါရဲ့။ ဗမာပြည်မှာ နိုင်ငံခြားသား ရေနံသမားတွေ ခြေရှုပ်နေတယ်လေ။ မျက်နှာဖြူတွေထက် မျက်နှာဝါတွေ ပိုများတယ် ပြောကြတာပဲ…။
အဲ အမေရိကားမှာလည်း ကြုံကြိုက်ချင်တော့ အထက်လွှတ်တော်၊ အောက်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ရွေးကောက်ပွဲတွေက စတော့မယ်လေ။ ရေနံစိမ်းတွေ မတရား ယိုဖိတ်နေတာကို တလကျော်လာတဲ့တိုင်အောင် မပိတ်ဆို့နိုင်ရကောင်းလားလို့ စောစောပိုင်းက တာဝန်ရှိတဲ့ ရေနံကုမ္ပဏီကို ဝေဖန်လက်ညှိုးထိုးနေရာက … အခုတော့ အစိုးရကိုပါ ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့လာကြပြီလေ… ။ လကမ္ဘာနဲ့ အာကာသမှာ ခြေဆန့်နိုင်တဲ့နိုင်ငံက ရေအနက်တမိုင်ကျော်က ရေနံပိုက်ကျိုး ပိုက်ပေါက်ကို ပိတ်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ ပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုတာ ယုံတမ်းစကားလားတဲ့။ Republican ဖက်ကသတင်းစာတစောင်မှာ ပါလာတဲ့ ရုပ်ပြောင်တခုကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
အမှန်ကတော့ … သက်ဆိုင်ရာရေနံကုမ္ပဏီကရော၊ အစိုးရရဲ့ ကမ်းခြေစောင့်တပ်တွေကရော၊ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့တွေရော၊ အန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေကရော တနည်းမဟုတ် တနည်းနဲ့တော့ ကြိုးစားကာကွယ် ပိတ်ဆို့နေကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ခုထက်ထိတော့ မအောင်မြင်သေးပါဘူး။ ရေနံစိမ်းတွေက ပိုတောင်ထွက်လာသလိုလည်း ပြောနေကြတာပဲ။ ဂါလံပေါင်း ၁၁ သန်းကျော် ပျံနှံ့နေပြီလို့လည်း သတင်းတွေ ကြားရတယ်။ ကမ်းခြေတွေအပေါ်အထိ ရောက်လာပြီဆိုတာလည်း တီဗီနဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေမှာ တွေ့ရတယ်။ ဘာပဲပြောပြော၊ ကမ်းစပ်နေ ငှက်မျိုးနွယ်တွေနဲ့ ရေထဲက သတ္တဝါတွေတော့ သေကျေပျက်စီးကုန်ကြပြီ။ အဲဒီဘက်ခြမ်းကမြို့တွေမှာ ငါးပုဇွန်ဈေးတွေလည်း တက်ကုန်ကြပြီ။ ငါးပုဇွန်ဖမ်းရေလုပ်သားတွေလည်း ဘောင်ကျဉ်းပြီး ဒုက္ခရောက်ကုန်ကြပြီ။
အင်း …ကျုပ်က စဉ်းစားမိတယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းက ရေနံမြေတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ရေပေါ်ဆီစုတ်ယူကြပုံကို ပြန်မြင်ယောင်ပြီး အကြံပေးရရင်ကောင်းလေမလားပေါ့။ ရေနံမြေရှိရာမြို့တွေကို ရောက်ဖူးကြရင် တွေ့ဖူးမှာပါ။ ။
သိတယ်နော်…၊ ရေနံမြေတွေမှာ ထွက်လာတဲ့ရေနံတွေကို ပိုက်နဲ့သွယ်ပြီး ပထမအဆင့် လှောင်ကန်ငယ်လေးတွေထဲကို မောင်းထည့်တယ် မဟုတ်လား။ လှောင်ကန်ထဲရောက် အနယ်ထိုင်တော့ သူ့ သဘာဝအလျောက် … ရေနံဓာတ်ငွေ့ လေက လေသပ်သပ်၊ အပေါ်ဆုံးက၊ ရေနံဆိုတဲ့ဆီက ဆီသပ်သပ်၊ အလယ်ခေါင်က၊ ပြီး အလေးဆုံးဖြစ်တဲ့ ရေက ရေသပ်သပ်၊ အောက်ဆုံးက။ သုံးထပ်သုံးလွှာ ဖြစ်နေတာပေါ့။
အဲဒါကိုမှ အပေါ်က ခေါင်းတိုင်လုပ် အငွေ့တွေ ထုတ်ပစ်၊ ပြီး ပိုက်နဲ့သွယ် တနေရာမှာ စု မီးရှို့ပစ်။ ရေနံမြေတွေမှာ ဓာတ်တိုင်လိုထောင်ထားပြီး မီးရှို့ထားတဲ့ ဆယ့်နှစ်ရာသီ မီးတုတ်ကြီးတွေ မြင်ဖူးမှာပေါ့။ ကျန်တဲ့နှစ်လွှာမှာတော့ အပေါ်လွှာကဆီ၊ အောက်က ရေ လေ။ အောက်ကရေတွေကိုလည်း ဘုံဘိုင်ခေါင်း တပ်ထားတဲ့ လှောင်ကန်တွေဆိုတော့ ရေတွေကို ဖွင့်ထုတ်ချပစ်လိုက်တာပေါ့။ ဆိုတော့ကာ လှောင်ကန်ထဲမှာ ဆီပဲ ကျန်တော့တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဆီထဲမှာ ရေနည်းနည်းမှ ကျန်မနေအောင် သန့်ရတဲ့အခါကျတော့ ဖွင့်ထုတ်ချလိုက်တဲ့ ရေထဲမှာ ဆီအစအနပါလာတာ မြင်ရမှ ရပ်ရတာပေါ့။ နော့ ရေနဲ့ဆီခွဲရအောင်က ဇကာနဲ့စစ်လို့ ရေစစ်နဲ့စစ်လို့ ရတာမှ မဟုတ်ပဲ။
ဆိုတော့ကာ ဖွင့်ထုတ်လိုက်တဲ့ရေထဲမှာ ဆီတွေ တစွန်းတစ ရောပါသွားရတယ် ဆိုပါတော့။ တွေ့ဖူး မြင်ဖူးမှာပါ။ မြောင်းကလေးလုပ်ပေးပြီး မြေကန်ကလေး တကန်ထဲ သွယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါ၊ အဲဒီ ကန်ရေပြင်မှာ ဆီတွေ ဝေ့တက်နေတာလေ။ အဲဒီ ဝေ့တက်နေတဲ့ ရေပေါ်ကဆီတွေကို ကျုပ်တို့ဆင်းရဲသားမိသားစုတွေက ဘယ်လို လုပ်ယူကြတယ် မှတ်သလဲ။ သဲ့ပြီး ခပ်မယူပါဘူး။ လွယ်လွယ်လေးရယ်။ တဘက်၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ မွှေးပွနဲ့ လွှားအုပ်ယူတာပေါ့။ ပုဝါက ချည်ထည် ၀ါဂွမ်းဆိုတော့ ဆီကို စုပ်တယ်လေ။ အဲဒီ မျက်နှာသုတ်ပဝါကိုမှ လက်ဆွဲပုံးထဲညှစ်ချ။ လုပ်ပါလေ့ အကြိမ်ကြိမ်။ ရေပေါ်ကဆီ ကုန်ရော…။
ကျုပ်က ဒီနည်းကို ပြန်တွေးမိပြီး ပြသနာဖြစ်နေတဲ့ ရေနံကုမ္ပဏီကို လှမ်းအကြံပြုရ ကောင်းမလား စဉ်းစားတုန်းရှိသေးတယ်။ bp က လုပ်နေပြီ။ ရေနံထည့် သံလှောင်ကန်ကြီးတွေ ပင်လယ်ပြင်ချပြီး ရေပေါ် ရေနံစိမ်းတွေကို စုပ်ထည့်နေလေရဲ့။ သူတို့ကတော့ စက်တွေနဲ့ တွန်းသင်္ဘောတွေနဲ့ဆိုတော့ မျက်နှာသုတ်ပဝါထက် မြန်တာပေါ့။ အမယ် … ပထမ ရက်တုန်းကတော့ ဂါလံပေါင်း ၄၁,၀၀၀ ၊ နောက်ပိုင်းတော့ တနေ့ … ၉၂,၄၀၀ ထိတောင် ပြန်စုပ်ယူနိုင်တယ်ဆိုပဲ။ ပင်လယ်ပြင် ညစ်ညမ်းမှုလည်း သက်သာ၊ ကုမ္ပဏီလည်း နည်းနည်း ပြန်ဝင်ငွေရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အရပ်ကတို့ရေ … အခြေအနေ မကောင်းပါဘူး။ တပတ်မပြည့်ခင်မှာဘဲ စုပ်ယူနေတဲ့သင်္ဘောနဲ့ သံကန်တွေပါ ပေါက်ကွဲမီးလောင်သွားရတယ်။ အခုဆိုရင် အမိန့်ထပ်ထုတ်လိုက်ပြန်ပြီလေ …။ အဲသည် ရေနံစိမ်းတွေ မျောပါပျံ့နှံ့နေတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ပေါ် … ဘယ် စက်တပ်ရေယာဉ်မှ ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခြင်း မပြုရ … တဲ့။
ဒါပေမယ့် လက်မလျော့ကြပါဘူး။ အခု top kill စနစ်တဲ့။ ဒီကနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မေလ၂၆ ရက်က စမယ်။ သည်စနစ်က အသစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ တူးစင်ပေါ်က စနစ်ပါ။ ရွှံ့စေးမှုန့်တွေ၊ ဘိလပ်မြေတွေနဲ့ ရေနံယိုထွက်ပေါက်တွေပေါ် လောင်းချ ပိတ်ပစ်တဲ့ စနစ်ပါ။ အောင်မြင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ကတော့ နည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် …
(မိုးမခ မှတ်ချက် - ဆရာမောင်သာရဆီက စာမူရရှိပြီး စာစီနေတုန်းမှာပဲ ယနေ့ တီဗီသတင်းအရ - Top Kill စနစ်လည်း မအောင်မြင်ပါဘူး … တဲ့)Rest of your post
Posted by အာဇာနည် at 3:11 AM0comments
ဗမာပြည် မှတ်တမ်း (Documentary)
Part 2. Burma: The Documentary. http://www.sun-maker.com/2010/01/burma-documentary.html
Part 3. Burma: The Documentary. http://www.sun-maker.com/2010/01/burma-documentary.html
Posted by အာဇာနည် at 5:07 PM 1 comments
ထက်ထက်မိုးဦး ကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တပ်ပါ နှစ်ခြမ်း ကွဲ နိုင်။ ယမန် နေ့ က သန်လျှက်စွန်းရေတပ်စခန်း
၀န်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ထက်ထက်မိုးဦး အား ထောက်ခံသည့် တပ်ကြပ်ကြီး သန်းမြင့် ၏ ဇနီး နှင့် ငွေစာရင်းရုံးမှ
တပ်ကြပ် အောင်နိုင် ၏ ဇနီး တို့ အချင်းများ ရာ နှစ်ဘက် အိမ်ထောင် သည် လိုင်းများ ပါလာ၍ တပ်ရေး ဗိုလ်ကြီး
အုန်းမြင့် က ၀င်ရောက်ဖြန်ဖြေပေးရသည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
Updated ၀၅ .၂၇ .၂၀၁၀ ထက်ထက်မိုးဦး ၏ ပရိသတ်များ ကလည်း တန်ပြန် ဆန္ဒပြမည် ဟု အင်တာနက်၊ဖိုရမ် များ နှင့် ဖေ့ဘွတ် တွစ်တာ
တွင် စည်းရုံး လှုံဆော်မှု များ စတင်ပြုလုပ်နေ
တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အုပ်စုတွေ ဖွဲ့ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြမယ်ဆိုပါလား။
လုံထိန်းတွေကလည်း ရုတ်ရုတ်သဲသဲမဖြစ်အောင် မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ပဲ ၀င်ထိန်းကြဗျာ ။
စွမ်းအားရှင်တွေကလည်း ဆူပူမှုမဖြစ်အောင် ၀ါးရင်းတုတ်တွေကိုင်ပြီးထိန်းသိမ်းကြဗျာ ။
ပွဲကတော့ ကြည့်ကောင်းတော့မယ်ထင်တယ် ။ဒီတစ်ခါဖြစ်မယ့် အရေးအခင်းက ထက်ထက်မိုးဦးက စ တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်
ယူကွန် ၊ ၊မေလ ၁၉ ရက်နေ့ က ရန်ကုန်မြို့ဆီဒိုနား ဟို တယ် တွင်7Days News ဂျာနယ်မှ အမျိုးသမီး
သတင်းထောက် မအေးသူစံ အား ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြုခဲ့သည့် သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ
ထက်ထက်မိုးဦး အား သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးမှ တရားနှင့် အညီ ဖြေရှင်းပေးခြင်း မပြုပါက သက်ဆိုင်ရာ တရား
ရုံးရှေ့ ၊စာပေစီစစ်ရေး ရုံးရှေ့ နှင့် ထက်ထက်မိုးဦး ၏ အိမ်ရှေ့ တို့ တွင် ဆန္ဒပြ ရန် စီစဉ် ထားသည် ဟု မအေးသူ
စံ ၏ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ အမည်မဖော်လို့ သည့် ရန်ကုန် စာနယ် ဇင်းသမားတစ်ဦး ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။
သရုပ်ဆောင် မှု တွင် ဈေးကွက် မရှိတော့ ဘဲ အကျဘက်ရောက် နေသည့် ထက်ထက်မိုးဦး ၏ ကိုယ်ထိလက်ရောက်
အကြမ်းဖက်မှု သတင်း ကို ဖော်ပြခဲ့သည့် The Voice အပတ်စဉ် ထုတ်သတင်းစာနှင့်
The First Music News အပတ်စဉ် ထုတ် သတင်းစာ တို့ အား စာပေစီစစ်ရေး မှ နှစ်ပတ်ထုတ်ဝေခွင့်မပြုရန်
ညွှန်ကြား ထားကြောင့် သိရသည်။
သရုပ်ဆောာင် ထက်ထက်မိုးဦးသည် ဆီဒီုနား ဟို တယ်တွင် ထိုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်ကိုယ်ထိလက်ရောက် မှု ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး နောက် ချက်ခြင်း ပင် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချူပ် ကျော်ဆန်း ၏ အိမ်သို့ သွားရောက်၍ သူမ၏ သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြခွင့် မပေးရန် နှင့် စစ်အစိုးရ ၀ါဒ ဖြန့် ချိရေး ဇာတ်ကား များရိုက်ကူး
ရာတွင် လည်း သူ ကူညီမည် ဖြစ်ကြောင်း ၀င်ရောက် ကန်တော့ ၍ အသနားခံ တောင်း ပန်ခဲ့သည် ဟု သိရသည်။
ထက်ထက်မိုးဦး ၏ လက်ရှိခင်ပွန်း မှာ သရုပ်ဆောင် ဇူးမြတ်ထက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ် က အဆိုတော် အနဂ္ဂ
နှင့် တရားဝင် လေးနှစ်ခန့် ပေါင်းသင်းခဲ့ပြီး နောက်လမ်းခွဲခဲ့ကြသည်။ထိုသို့ လမ်းခွဲရသည့် အကြောင်းမှာ သူမ၏ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း တယ်လီဖုန်း ခေါ်ဆိုမှု မှတ်တမ်း အမှတ်တမဲ့ ကြည့်ရှုမိသောကြောင့် အနဂ္ဂ အားဓါး နှင့် လိုက် ခုတ်ရာ မှ အကြင်လင်မယား ဘ၀ နိဂုံးချုပ်ခဲ့ရသည် ဟု ထိုအချိန် က ရန်ကုန် သရုပ်ဆောင် လောက တွင် နာမည် ကြီးခဲ့သည်။
ထက်ထက်မိုးဦးသည် သရုပ်ဆောင် ဇူးမြတ်ထက် နှင့် မယူခင် ဇာတ်သဘင် များ ကို လေ့လာလိုက်စားခဲ့သေး
ရန်ကုန်မြို့ ရှိ နာမည် ကျော် ဂျာနယ်တစ်စောင် မှ အယ်ဒီတာ တစ်ဦးက “အစိုးရ အား ဝေဖန် ရေးသားခြင်းလည်း မဟုတ်ပါဘဲ ထက်ထက်မိုးဦး သတင်းဖြစ်ရပ်
နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖော်ပြမိသည့် ဂျာနယ် နှစ်စောင် အား စစ်အစိုးရ မှာ ထုတ်ဝေခွင့် ရပ်နား ခိုင်းခြင်းမှာ မကြာခင်ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် သတင်း လွတ်လပ်ခွင့် နှင့် ပတ်သက်၍ မူ ဆိုဖွယ်ရာပင် မရှိတော့ ဟု ပြောသည်။
စစ်အစိုးရသည် မြန်မာ အဆိုတော် နှင့် သရုပ်ဆာက်များ ကြား တွင် ထိုကဲ့ သို နာမည်ဆိုး အဖြစ်အပျက်များ
ပေါ်ပေါက်လာပါက စာမျက်နှာ များ ထက်တွင် သတင်းများ ပါရှိ မလာ ရန် တားမြစ်ပေးထားပြီး နောက် ၀ါဒဖြန့် 
ချိရေး ရုပ်ရှင် ကားများ အား ရိုက်ကူးစေသည်။
သတင်းထောက် မအေးသူစံ သည် သူမအား ထက်ထက်မိုးဦး က ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ပြုမှု နှင့် ပတ်သက်၍
ရန်ကင်းမြို့ နယ် တရားရုံးတွင် တရားစွဲ ဆိုမှု ပြုထားပြီး ယနေ့ ကြားနားမည် ဟု သိရသည်။
သတင်းထာက် မအေးသူစံ အပါအ၀င် သူမ အလုပ်လုပ်နေသည့် ဂျာနယ်တိုက်က မူ တရားရုံးမှ တရား နှင့် အညီ
ဆုံးဖြတ်ပေး မည် ဟု မျှော်လင့် ရသည် ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် နာမည် ကျော် သရုပ်ဆောင် ၊အဆိုတော် များ ၏ အတွင်း ရေး နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာမီဒီယာများက
များ သော အားဖြင့် ဖုံးဖိပေးခဲ့သည်။
ထက်ထက်မိုးဦး သည် မိုးကုတ် မြို့ တွင် မွေးဖွားခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ် တွင် ပန်းသခင် ဇာတ်ကား ၂၀၀၁ ခုနှစ် တွင်
သမီးမိုက် ဇာတ်ကား တို့ ဖြင့် အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင် ဆုများရရှိခဲ့သည်။
သူမ သည် အလှုအတန်း များ တွင် ရက်ရော သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ဘုရား၊ကျောင်း၊ရဟန်း ဒါယကာမကြီး တစ်
ယောက် ဖြစ်ပြီး မရှိ ဆင်းရဲ သား များ ကို လည်း လှုဒါန်း သူ ဖြစ်သည်။
ယခု ဖြစ်ရပ် နှင့် ပတ်သက် ၍ မင်းသမီး ထက်ထက်မိုးဦး ဘက်က စာနာ သူ များ လည်းရှိသည်။ သူမ၏ ပရိတ်သတ်
ကမူ သူမ၏ ဖေ့ဘွန် ဖန်ကလပ် တွင် အားပေး စကားများ အားရေး ထားပြီး သတင်း ထောက် အား မဆင်မခြင် မေး
သည် ဟု သုံးသပ် ထားသည်။
ဆီဒီုနား အရေးအခင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းဂျာနယ် များက သတင်းထောက် ဘက်တွင် ရှိပြီး ပေါပ် ဂျာနယ် (အချို့ )
ကမူ ထက်ထက်မိုးဦး ဘက်တွင် ရှိသည် ဟု သိရသည်။
ရေပြတ်လပ်မှု နှင့် ကြုံတွေ့ နေရသည့်ကျေးရွာ များက မူ သောက်သုံးရေ မှန်မှန် ရရှိပြီး ကာမှ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူ
ဘက်တွင် လိုက်ရမည် ကို ဆုံးဖြတ် မည် ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ အထက ၁ ဒဂုံ ရှိ ဆရာမ တစ်ဦးက “ထက်ထက်မှန်တယ် အခု လို မှတ် လောက် သားလောက် ဖြစ်အောင် ဆုံးမပေး
ရမယ် သူတို့ တွေ က ငါမီဒီယာပဲ ဆိုပြီး လူစွာလုပ်လွန်း တယ် ထက်ထက်မိုးဦး ကိစ္စ မပြောနဲ့ ပုဂလိက ကျောင်းကိစ္စ ကျွန်မကို အင်
တာလာ ဗျူးတာ တောင် ကောင်းကောင်း ဖြေ မဖြေရင် အကြောင်း သိသွားမယ် ဆိုသည့် ပုံစံမျိုး ဟု ” ဟု ပြောသည်။
စစ်တမ်းများ အရ သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦး၏ ပရိသတ် က မူ သူမဘက်တွင် တစ်လုံးတစ်စည်းတည်း
ရှိသည်။ ထိုကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်၍ ၀ါရင့် သရုပ်ဆောင်များ နှင့် ၀ါရင့် ဂျာနယ် လစ် အချို့ က ကြားဝင် ဖြန်ဖြေပေး ရန် ဆန္ဒရှိသည် ဟု သိရသည်။
ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် လည်း ထိုကိစ္စ မှာ နှစ်ဘက် စလုံး မှ တမင် ရည်ရွယ်ထား
ရိုးမရှိ ဘဲ ရာသီဥတု အပူရှိန် ကြောင့်စိတ်ခံစား မှု များ ထိလွယ်ဆတ်လွယ် ဖြစ်ကာ စကားနောက် တရားပါ ကြခြင်းသာ
ဖြစ်သည်။ပြဿနာ အရင်း ခံမှာ လည်းဖြေရှင်း လို့ မရသည့် ပြဿနာ မဟုတ်ဘဲ နှစ်ဘက် တွေ့ ဆုံ၍ သဘောထားကြီးကြီး
ဖြင့် တောင်းပန် သင့် သူကာ တောင်း ပန်ကာ ကြေအေး လျှင်ရမည့် ကိစ္စ ဖြစ်သည် ဟု ယူဆသည်။
နှစ်ဖက် တွေ့ ဆုံညှို နှိုင်း ၍ အဖြေရှာခြင်းဖြစ် ထပ်မံ ပေါ်ပေါက် လာမည့် ပဋိက္ခ အကျိုးဆက်များ ကို ရှောင် လွှဲနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၀ါးရင်းတုတ်နှင့် ထိုက်တန်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ချက်
သူတို့ကတော့မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်တွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့သူများဖြစ်ပြီး ရေတို ရေရှည်စီမံကိန်းတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်စီးခဲ့ကြသော၊ပြည်သူလူထုကိုဂုတ်သွေးစုပ်၊လူတစ်စုကောင်းစားရေး၊တရားသေ၀ါဒနဲ့လူတလုံးသူတလုံးဖြစ်လာခဲ့ကြသူတွေပါ။ အခုလည်း န အ ဖ(နွားအ အဖွဲ့)ကပြုလုပ်မဲ့၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြလေဦးမည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမပေးပဲ အုပ်နီခဲကိုသာပေးသင့်သော(တ စ ည)ကြီးများအမည်စာရင်း
၁။ ဦးထွန်းရီ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး(ငြိမ်း) ဥက္ကဋ္ဌ
၂။ ဦးသန်းတင် ဒု-ဝန်ကြီးချုပ်၊ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး
၃။ ဦးခင်မောင်ကြီး ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး
၄။ ဦးချစ်လှိုင် ဒုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်-ရေ(ငြိမ်း) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး
၅။ ဦးလှထွန်း ဗိုလ်မှူးချုပ်(ငြိမ်း) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး
၆။ သူရဦးစောဖြူ ဒုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်-လေ(ငြိမ်း) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး
၇။ ဦးထွေးဟန် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး
၈။ ဦးသိန်းငွေ ဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
၉။ ဦးဗန်ကူး ဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
၁ဝ။ ဦးစောကျော်ခင်ဝင်း ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
၁၁။ ဦးထွန်းရင်လော ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
၁၂။ ဦးခင်မောင်ကျော် အငြိမ်းစားဗိုလ်မှူးချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
၁၃။ ဦးအေးစံ ဗိုလ်မှူးချုပ်(ငြိမ်း) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
၁၄။ ဦးသန်းလှ ဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
၁၅။ ဦးစိန်ရ ဒုဝန်ကြီး(သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-ငြိမ်း) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
၁၆။ ဦးအောင်ဝင်း မွေး/ရေဒုဝန်ကြီး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ ဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း)
၁၇။ ဦးမြမောင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
၁၈။ ဒေါ်မေမေအောင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
၁၉။ ဦးဟန်ရွှေ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
၂ဝ။ ဦးထွန်းရီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
၂၁။ ဦးစိန်အောင် ဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
၂၂။ ဦးဖေလိန်းမောင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
၂၃။ ဦးရဲဝင်း ဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ တို့ ဖြစ်ကြသည်။
http://swenaing.blogspot.com/ မှRest of your post
Posted by အာဇာနည် at 4:55 PM0comments
အကောင်းနှင့် မကောင်း ရောရောင်း ...ကဲ စီပွားရေး
ကျပ်ငါးသိန်းဖုန်း ဘီလ်ကတ် ကတ်ပျက် နှင့် သုံးပြီးသား ကတ်များကို ရောနှော ရောင်းချ မှုများရှိ
ထို့အတူ တာမွေမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် အဆိုပါဖုန်း သုံးစွဲသူ သုံးဦး ကလည်း အလားတူ ဖြစ်ရပ်များ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ Top Up ကတ်များ ဖြန့်ချိသည့် အီလိုက်တက် ကုမ္ပဏီသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း ခဲ့ရာ ထိုကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးဌာန၊ ဌာနမှူး ဦးမိုးမင်းဟိန်းက ၎င်းတို့ အနေဖြင့် အဆိုပါ ကတ်များ၏ အရည်အသွေး စစ်မှန်မှုကို ၎င်းတို့ ကုမ္ပဏီ နှင့် တရားဝင် ရောင်းချခွင့် ပေးထားသည့် ဆိုင်များမှ ၀ယ်ယူပါ က အာမခံ နိုင်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ “ကျွန်တော်တို့ အီလိုက်တက် အနေနဲ့ ၀ယ်ယူတဲ့ သူတွေ အဆင်ပြေပြေ ၀ယ်နိုင်အောင် အီလိုက်တက် နာမည်နဲ့ ဆိုင် ခုနစ်ဆိုင်၊ ပြီးတော့ စီးတီးမတ် နဲ့ တခြား မိုဘိုင်းဖုန်း ဆိုင်တွေမှာလည်း ၀ယ်ယူ နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထား ပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ကတ် ၀ယ်ယူသူများ အနေဖြင့် အခက် အခဲကြုံတွေ့ခြင်း မရှိစေရန် အဆိုပါ ခဲခြစ်ကတ်များတွင် ပါဝင် သည့် MPT တံဆိပ်ကို ကြည့်ကာ သေချာ စစ်ဆေး ၀ယ်ယူစေ လိုကြောင်း ၎င်းက အကြံပြု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း အင်တာနက်ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။Rest of your post
Posted by အာဇာနည် at 4:53 PM2comments
သိန်းပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးမည်ဟုခန့်မှန်းကြပါတယ်။ နာရီ(၂ဝ)ကျော်မီးလောင်ခြင်းဖြစ်၍ မြန်မာပြည်
ဤသို့ အချိန်ကြာကြာမီးလောင်ရပါသနည်း။ အကြောင်းအချက်များစွာရှိသည့်အနက် အဓိကအချက်
ကတော့ရေလုံလောက်စွာမရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မီးလောင်မှုသတင်းဖေါ်ပြခြင်းများစွာတွင် မီးသတ်ကား
များသည်လိုအပ်သောရေကို ကန်တော်ကလေးရေလှောင်ကန်နှင့် ကန်တော်ကြီးမှရေကိုအခေါက်ခေါက်
အခါခါ သွားရောက်ဖြည့်တင်းယူဆောင်နေရသည်ဟု ဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ ဈေးအဆောက်ဦးတွင်မီးသတ်
စာရေးသူဟာဈေးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ရေတွင်းကုန်းအမည်ရှိရပ်ကွက်မှာနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သပြေကုန်းရပ်ကွက်နှင့်ကပ်လျှက်ရပ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာဈေးနေရာဟာရှေးအခါကတရုတ်သင်္ချိုင်း
ကုန်းမြေမြင့်အရပ်ဖြစ်ပြီး စာရေးသူတို့ကလေးဘဝစွန်လိုက်ကစားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်းမြေမြင့်ကို
ဖြိုဖျက်မြေညှိ၍ဈေးအဆေါက်အဦးများဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့မြို့ လယ်ခေါင်
မြို့ နယ်များနဲ့ဆင်ခြေဖုန်းရပ်ကွက်များဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ တာမွေမြို့ နယ်တွေမှာရှေးအခါ
ကတည်းလမ်းများအတွင်းနဲ့လမ်းထိပ်လမ်းဆုံတွေမှာ မီင်္းသတ်ပိုက်ခေါင်းရေထွက်ပေါက်များနေရာအနှံ့ 
တပ်ဆင်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။ စာရေးသူတို့ ငယ်စဉ်အခါက အဆိုပါမီးသတ်ပိုက်ခေါင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ
မီးသတ်၊ မြူနီစပယ် (ယခုစည်ပင်) တို့ ကနှစ်စဉ်တလမ်းဝင်တလမ်းထွက်စစ်ဆေးတာတွေမြင်တွေ့ ခဲ့ဘူး
ပါတယ်။ လမ်းထိပ်တွင် သင်္ကြန်ရေကစားမဏ္ဍပ်များဆောက်၍ မြူနီစပယ်မှခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရရှိပါက
နိုင်ရန်အင်္ဂလိပ်အစိုးရမှ ရန်ကုန်မြို့ ကိုစတင်တည်ဆောက်သည့်အခါကပင်စနစ်တကျထည့်သွင်းတည်
မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အင်မတန်မှကောင်းမွန်သည့်စနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ အပြင် ဂျိုးဖြူရေ
ပိုက်လိုင်းကြီးများကိုလည်းနှစ်စဉ်သန့် ရှင်းရေးပြုလုပ်မှုများရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ တော်
မှာ ရေပြဿနာဆိုတာကြီးကြီးမားမား မကြုံခဲ့ဘူးကြပါ။
ခဲ့မည်ထင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းဂျိုးဖြူပိုက်လိုင်းများကိုသန့် ရှင်းရေးမလုပ်တော့သည့်အတွက်ဂျိုးဖြူပိုက်
အပါအ၀င် ရန်ကုန်မြို့ ရှိလမ်းများအတွင်းဆက်သွယ်ထားသည့်ရေပိုက်လိုင်းများ၊ မီးသတ်ပိုက်လိုင်းများ
အားလုံးသံချေး(ချီး) ဆို့ ခါ ရေစီးရေလာမကောင်းတော့ပါ။ သည့်အတွက်လမ်းများအတွင်းရှိတထပ်အိမ်
များသို့ ပင်ရေမတက်တော့ပါ။ တထပ်အိမ်များပင်မော်တာတပ်ဆင်ရေစုပ်တင်ရသည့်အခြေသို့ ရောက်
လျှပ်စစ်မီးမှန်မှန်မရတဲ့အတွက် ရေစုပ်စက်မလည်နိုင်တော့ ရေတင်ရခက်လာကြပြီး ရေပြဿနာလည်း
တက်မှန်းမသိတက်လာပြီး၊ ထပ်ဆင့်ပြဿနာတွေလည်းပေါ်လာပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ရပ်ကွက်အတော်
များများမှာနေ့ ဘက်မီးလာချိန်မမှန်ဘဲ ညအိပ်ချိန်ရောက်မှမီးလာတော့ မော်တာဖွင့်ပြီးရေတင်ကြရတဲ့
အတွက် ညဆိုမော်တာသံများဆူညံပြီး နေ့ နဲ့ ညမှားနေတယ်လို့ တောင်ပြောသံကြားလာရပါတယ်။
ဒီနှစ်နွေနေဟာလည်းခါတိုင်းနှစ်တွေထက်ပိုပူတဲ့ အတွက်ရန်ကုန်မြို့ အပါအ၀င် ပတ်ဝန်းကျင်မြို့ ရွာ
ရန်ကုန် အင်လျားကန်မှာလည်းရေခန်းခြောက်စပြုနေတဲ့ပုံတွေ တွေ့ လိုက်ရပါသေးတယ်။ အဲသလို
ရာသီပူပြင်းချိန်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်လွယ်တာ သဘာဝပါ။ မမျှော်လင့်ဘဲ မင်္ဂလာဈေးမီးလောင်မှုဖြစ်
လာတော့ ရေပြဿနာနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ တော့တာပါဘဲ။ မင်္ဂလာဈေးအဆောက်အဦမှာမီးသတ်ပိုက်ခေါင်း
ရေထွက်ပေါက်များတပ်ဆင်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် အမြင်ဘဲရှိနေမှာပါ။ ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းရပ်ကွက်ထဲမှာ
တွေကရေလည်း ကောင်းကောင်း ထွက်လာနိုင်စရာရှိမှာမဟုတ်ပါ။ အဆောက်အဦးအပေါ်မှာလည်းရေ
လှောင်တိုင်ကီ ကြီးကြီးမားမား ရှိပုံမရပါ။ ကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦကြီး မီးလောင်တော့အရေးအကြီးဆုံး
ဖြစ်တဲ့ရေ လုံလုံလောက်လောက်မရတော့ မီးလောင်မှုတာရှည်ခဲ့တာပါ။ အဖြေကတော့နာရီ(၂၀)ကျော်
ကြာ စံချိန်တင်မီးလောင်မှုကြီးအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိရပါတယ်။
နောက်အဓိကတချက်ကတော့ခေတ်မှီ မီးသတ်ကားများမရှိခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦမြင့်တွေကို
မီးငြိမ်းနိုင်မယ့် မီးသတ်ကားအလုံအလောက်မရှိခြင်းပါ။ ငါးထပ်အဆောက်အဦ မင်္ဂလာဈေးကြီးမီးလောင်
နေစဉ်မှာ အထပ်မြင့်မီးငြိမ်း မီးသတ်ကား ၄-၅ စီးထက်ပိုမရှိနေဘူးလို့ သတင်းများကဆိုပါတယ်။မီးသတ်
ကားအစီးပေါင်း (၆၀)လောက်ရောက်ရှိလာတယ်ဆိုပေမယ့်အားလုံးနီးပါးဟာ သာမန်မီးသတ်ကားများဘဲ
လူရယ်စရာဖြစ်နေမှာပါ။ မီးလောင်နေစဉ် ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်များတွင် (၇)ထပ်(၈)ထပ် အဆောက်အဦး
များစွာကို ဓါတ်ပုံများတွင်တွေ့ ရှိရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ မှာအခုအခါ (၁၀)ထပ်ကျော် ဟိုတယ်အဆောက်
အဦတွေများစွာရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဆောက်အဦမြင့်များ မတော်တဆမီးလောင်မှုဖြစ်လာရင်
လက်ရှိမီးသတ်စနစ်နဲ့ ဆိုရင်တော့မတွေးရဲစရာပါ။ အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေပါ နောက်ဆက်တွဲသတင်းများ
စစ်အစိုးရရဲ့ အလွန်အမင်း ညံ့ဖြင်းတဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေကြောင့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများနဲ့ 
မြန်မာနိုင်ငံဟာ့့့့့့့့့ 
ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးတခုခုဖြစ်ဖို့ အတွက် ပလပ်စတစ်ကောက်ရရင် လည်းကောက်ရမယ်။
လူမှုရေးနှင့် နိုိင်ငံရေ့း အထောက်အကဲူပြုရေး ရံပုံငွေရှာဖွေရေး အကြံပြုတင်ပြခြင်း
လူမှုရေးစိတ်ဓါတ် ရှိသူ အပေါ်င်းနင့် နှလုံးသား ပြည့်ဝသူအပေါင်းသို့ရည်စူးလျက်လေးစားစွာ အကြံပြုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် နှလုံးသားပြည့်ဝပြိး ကူညီလိုစိတ် စာနာစိတ် အပြည့်အ၀ ရှိကြသူများ သည် မြန်မာနိင်ငံ သို့အကူအညီများပေးပို့သောအခါတွင် လက်ရှိအုပ်ချုပ်သူ များသည် သူတို့ ကြောင့်ဖြစ်ရပါသော လူမှုအကြပ်အတည်း ကို သူတို့ ကိုယ်တိုင် မကူညီသည့်အပြင်ပြင်ပမှ အကူအညီများ ပေးပို့ သည်ကိုလဲ မနှစ်သက် သည့်အပြင်ပေးပို့ သော အကူအညီများမှ ပင် ဖြတ်စားလတ်စား ကိုယ်ကြိုး ရှာလိုစိတ်မတရားကြီးမားကာာအနှောက်အယှက်အမျိုးစုံပေးပါသည် ။
သို့ ပါသဖြင့်ပွင်းလင်းမှု ( Transparency ) ရှိရန်မှာ လုံးဝ မဖြစ်နိင်သော ကိစ္စ ဖြစ်နေပါသည် ။ သို့ ပါသဖြင့် ရံပုံငွေကောက်ခံသော သူနှင့်အလှုငွေလှုဒါန့်းသောသူတို့ အပေါ်တွင် အများသူငါမယုံကြည်နိုင်သံသယ ပွားစရာများ ဖြစ်လာရပါသည် ။ သို့ ပါသဖြင့် စေတနာရှိသူ နှလုံးသား ပြည့်ဝသူ ( ထည့်ဝင်လှုဒါန်းလိုသူ အပါအ၀င်ကောက်ခံပေးသူ
တို့ ပါ ) အခက်ခဲတွေ့ နေရပါသည် ။
အချင်းချင်း နားလည်နိင်သူ၊ယုံကြည်မှု ပြည့်ဝသူတို့ အချင်းချင်းအကြားတွင် ရံပုံငွေကောက်ခံမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြရမှာ ဖြစ်သလို ၊ဖေါက်ထွက်စဉ်းစားပြီး အခြားနည်းလမ်းများကိုလဲ ဆွေးနွေးး စဉ်းစား တိုင်ပင်သင့်နေသည်မှာအချိန်ပင်အတော်လွန်ခဲ့ပါပြီ ။ တချို့ သောအစည်းအဝေးများတွင် တခါတရံ တင်ပြသူများရှိတတ်ပါသော်လည်းအစည်းအဝေး ကိုဦးးစိးကျင်းပသူများမှာအကြေအလည် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းမရှိကြဘဲ မဖြစ်နိင်တာလေးအသေးအမွှားးလေးမျာကိုထောက်ပြပြီးဆွေးနွေးအဆင့်သို့ တက်မလာနိင်အောင်ပင် ပယ်ချတတ်ပါသဖြင့်ယခုလို အကြံပြုစာရေးတင်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ကိုယ်တိုင်လည်းတင်ပြလာသော အကြံ အညဏ်ထက် သာလွန်သော အကြံညဏ် အစီအစဉ် များထုတ်နိုိင်ခြင်းလဲမရှိ အလွယ်လေးပယ်ချနေတာကတော့ မဖြစ်သင့်သော ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည် ။
ယခု ကျနော်တင်ပြလိုသည်ကိုနိုင်ိင်ငံအကြိုးအတွက် တင်ပြလာသည် လို့စာနာ ရှုမြင်ပြီးအလေးထားစဉ်းစားစေလိုပါသည် ။ ( ငါလိုလူကို လာတင်ပြရအောင် မင်းက ဘာကောင်လဲ ) ဆိုသည့် စိတ်ကြိးဝင်မှုများကိုဘေးချိတ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်စိတ်ဓါတ်ဖြင့် စဉ်းစားပေးကြပါရန် ဦးးစွာ ပန်ကြားလိုပါသည် ။
ခြင်း၊တွေ့နိုင့်သောအခက်အခဲ အဟန့် အတားများကို ကျော်လွှား နိုိင်အောင် ၀ိုင်းဝန်းအကြံပြုပေးကြပါရန် လည်း တဆက်ထည်းပန်ကြားလိုပါသည် ။
( ၁ ) ပလပ်စတစ်ဘူးအစ များ ကောက်ခံစုဆောင်း ပြီးကော်စေ့( Plastic pallets ) အဖြစ်ပြောင်းပြီးပြည်တွင်းသို့တရားဝင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှ တင်ပို့ ပြီးသွင်းကုန်ဝင်ငွေ ( import earning ) အဖြစ် တရားဝင် ရောက်ရှိနိင်စေပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပလပ်စတစ်များ ကိုစုဆောင်းပါကအမှိုက်မှ အကျိုးအမြတ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် ပါဝင်ကူညီလိုသူများအတွက်လဲ၎င်းတို့ ဝင်ငွေမှ တောင်းခံခြင်းမဟုတ်သည်ကတကြောင်း၊ကျနော်တို့ မှ ကာယ ညဏ စိုက်ထုတ်ပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရဦးးမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကျေကျေနပ်နပ် ပါဝင်ကူညီလာနိုင်စရာ လမ်းစ ရှိသလိုအချင်းချင်း ပိုမိုထိတွေ့ မှုများ ပိုရှိလာနိင်ပါသည် ။
အသုံးပြုနိင်သော ပလပ်စတစ်များမှာနွားနို့ ဘူးခွံများ ကဲ့သို့ပလပ်စတ်အပျော့များသည် ကော်အစေ့ ( pallets ) ပြန်လုပ်ရန်လွယ်ကူခြင်း နှင့် ရန်ကုန်တွင်ဈေးကောင်းရခြင်း အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ပါသည် ။ လတ်တလော ရန်ကုန်တွင်တစ်ကီလို ကို( ၁.၂ မှ ၁.၅ ) ဒေါ်လာ အထိဈေးပေါက်နေပါသဖြင့်တစ်တန် တင်ပို့ နိုင်လျှင်ရံပုံငွေဒေါ်လာ
( ၁၂၀၀ မှ ၁၅၀၀ ) အထိ ရနိုင်ပါသည် ။ ကွန်တိန်နာတလုံး ( တန်၂၀ ) တင်ပို့နိုင်လျှင်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀- အထိရနိင်ပါသည် ။ ပို့ ဆောင်ခအခွန်အကောက် စသည်များကိုတော့ ကျနော် ကောင်းစွာ မသိပါ ။
ကျနော်တို မြန်မာတွေထဲတွင်ကော်ဖီဆိုင်များတွင်အလုပ်သူများသလို၊လုပ်ငန်းခွင် ရုံးများတွင်၎င်း၊မိမိနေထိုင်ရာ အိမ်နှင့် တိုက်ခန်းများတွင်၎င်း၊မိမိအသိမိတ်ဆွေများထံ အကူညီတောင်းစုဆောင်းကြပါမည်ဆိုလျှင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ရရှိသော ဘူးများကို သယ်ယူရာတွင် ၀န်ကျင်းစေရန်ဘူးကိုဓါးဖြင့် ဖြတ်တောက် လိုက်ပြီး ကော်ပြားလေးများအဖြစ်သယ်ယူပြီးတစ်လတစ်ကြိမ်၊သို့မဟုတ်ဘုရားကျောင်းဘုန်းတော်
ကြီးကျောင်းများတွင် စုရပ်အဖြစ် ဆုံဆည်းပြီးး စုဆောင်းနိုင်ပါသည် ။
ကောင်းစွာကျွမ်းကျင်ပါသည် ။ နေရာ အကျယ်အ၀န်း ၁၀ ပေ ပတ်လည်ဆိုလျှင်ရနိင်ပါသည် ။ ဘုန်းကြီးးကျောင်းတွင်၎င်း၊ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်း
( Church ) တခုခုတွင်၎င်း ထားရှိနိင်ပါသည် ။ စက်တန်ဘိုးမှာလဲ မကြီးးပါ။
( ၂ ) သစ်ပင်ပန်းမာန် များ စိုက်ပျိုးရောင်းချခြင်း
Sydney မြို့တွင်ပန်းပင်ဈေးကွက် အကြီးကြီးးရှိပါသည် ။ ကျနော်တို့ စုပေါင်းစိုက်ပျိုးကြပြီဘုန်းကြီးကျောင်း နှင့် ဘုရားကျောင်းများတွင် ထားရှိပြီးရောင်းချလျှင်အနည်းနှင့်အများပုံမှန်ဝင်ငွေလေးတခု ရနိင်ပါသည် ။
မြန်မာအချင်းချင်းလဲ ရောင်းနိုင်သလို့ မြန်မာ နိုိင်ငံအပေါ် စေတနာထားပါဝင်ကူညီနေကြသောကောင်စီလူကြီးများ Councilors ထံအကူအညီတောင်းခံပြီးလည်းရောင်းချနိင်ပါသည် ။
၄င်းအပြင် အသီးးအနှံ များစိုက်ပျိုးခြင်း ၊ မုန့် ပဲသရေစာ
( အထားခံသောပဲကြမ်းကြော်၊အာလူးကြော်အိမ်တွင်ကျော်လျှင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနံ့အသက် ပေးနိုိင်သောငါးခြောက်ကြော် ) စသည်များ ကိုလုပ်ပြီးအခမ်းအနာများတွင်၎င်း၊တစ်လတစ်ကြိမ် တနေရာရာတွင် ၄င်းဆုံရပ်သတ်မှတ် ပြီး ရောင်းချ လျှင် အချင်းချင်းပိုမိုထိတွေ့ ဆုံဆည်း မှုပိုမိုများလာနိုိင်သလို အကြံညဏ် အသစ်များလဲ ပိုမိုရလာနိုင်ပါသည် ။
အားလုံး ကိုအထူးပန်ကြားလိုသည်မှာကျနော်တို့တွင်တိုင်းပြည်အပေါ်ထားသော စေတနာစိတ်ဓါတ်များကို လေးစားပါသည် ။ သို့ သော် ကျနော်တို့ စိတ်ဓါတ်များကိုဗိုလ်ချုပ်၏ စိတ်ဓါတ်ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပါကမနှိုိင်းသာအောင် ကွာခြားပါသည် ။ ဗိုလ်ချုပ်သည် အသက်သုးံဆယ်မပြည့်မှီ ကပင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဆိုသော မည်သူတဦးးတယောက်မှ မရနိင်သောဂုဏ် ထူးဝိသေသကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသော်လည်းလူအားလုံး၏ စကားကို အလေးထားနားထောင်တတ်သည်မှာ.ဗိုလ်ချုပ်ခေါင်းထဲ၊နှလုံးထဲတွင်မိမိ အရေးကိုလုံးဝဘေးချိတ်ပြိးမြန်မာလူမျိုးအရေးသာ သူ့ ခေါင်းထဲတွင် ရှိသည်မို့ ငါဟူသောမာနလုံးဝ မရှိသည်ကို စံနမူနာယူပြီးကျနော်၏တင်ပြချက်များကိုမာန မထားဘဲ စဥ်းစားပေးစေလိုပါသည် ။ လိုအပ်ချက်အားနည်းချက်အခက်အ အဟန့် အတာများ ကိုလည်းဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပေးစေလိုပါသည် ။
တဆက်ထည်း ပိုမို ကောင်းမွန်သောအကြံအည်ဏ်များကိုလည်း တင့်ပြကြပါလို့ ပန်ကြား လိုပါသည် ။
လှိုင်မြင့် Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:01 PM 1 comments
ဆရာတော်တရား အင်တာနက်ပေါ်မှာ တိုက်ရိုက် တရားနာလိုလျင်
တရားပွဲတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုသတင်း LIVE DHAMMA
သကျသီဟ ဝဋံသကာ၊ ပါဠိ သိရောမဏိ၊ ဘီအေ၊
တိပိဋက နိကာယကျောင်းတိုက်ကြီးများ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှု မဟာနာယက
ကျေးဇူးတော်ရှင် (နဝမ) ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
နေ့ရက်- ၃၀ ရက် မေလ တနင်္ဂနွေနေ့
ဂျပန်စံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီ
စင်္ကာပူစံတော်ချိန် ညနေ ၅ နာရီ
မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၃:၃၀ နာရီ
ရုရှားစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁ နာရီ
နယူးယောက်စံတော်ချိန် နံနက် ၅ နာရီ
နေ့ရက်- ၆ ရက် ဇွန်လ တနင်္ဂနွေနေ့
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 12:43 PM0comments
The experts said they are also looking into "suspicious activity in Myanmar," including activities of Namchongang Trading, one of the companies subject to U.N. sanctions, and reports that Japan in June 2009 arrested three individuals for attempting to illegally exportamagnetometer — which measures magnetic fields — to Myanmar via Malaysia allegedly under the direction ofacompany known to be associated with illicit procurement for North Korea's nuclear and military programs. The company was not identified.Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 12:00 PM0comments
ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြပါ ( သူခိုးနဲ့ဂျပိုး တိတ်တိတ်ပုန်း နုကလီယား အပေးအယူ ကိစ္စပါ)
By ဒေါ်ခင်မျိုးသက် သောကြာ, 28 မေ 2010 ထပ်ဆင့် ဖြန့်ဝေရန်
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရက လိုက်နာမှုရှိမရှိ စောင့်ကြည့်တဲ့ အဖွဲ့က - မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ နျူကလီးယားနဲ့ ဒုံးလက်နက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာနဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် မူမမှန်တဲ့ နိုင်ငံတွေကို ဖြန့်ဖြူးနေတယ်လို့ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်လိုက်ချိန်မှာပဲ အခုကိစ္စအတွက် စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနကလည်း သောင်္ကြာနေ့မှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် ဒေသတွင်းမှာ အန္တရာယ် ဖြစ်စေမယ့် လုပ်ရပ်တွေကို စောင့်ကြည့်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး သင့်လျော်တဲ့ ခြေလှမ်းနဲ့ အရေးယူမှုတွေ လုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။ အပြည့်စုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြထားပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံဟာ တရားဝင်ဖြစ်အောင် ဟန်ပြလုပ်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားက ရာဇ၀တ်မှု ကွန်ယက်တွေကို အသုံးချပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် နိုင်ငံတချို့ကို နျူကလီးယားနဲ့ ဒုံးလက်နက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာနဲ့ ပစ္စည်းအကူအညီတွေ ပေးနေတယ်လို့ အစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈၇၄) ကို ချိုးဖောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလို နိုင်ငံတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံက စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်မိကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ ပီဂျေ ခရောလေး (P.J. Crowley) က အခုလို ပြောပါတယ်။
“အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် တချို့နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ဆက်ဆံရေးထားရှိတဲ့အပြင် ပိတ်ပင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတင်ပို့မှုတွေ ပြုလုပ်နေတာကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျနော်တို့ဘက်ကရော၊ တခြား နိုင်ငံတွေကပါ ကုလသမဂ္ဂ ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈၇၄) အရ ဒေသတွင်းရော၊ ကမ္ဘာ့ တခြားနေရာတွေ အတွက်ပါ မတည်မငြိမ် ဖြစ်စေတဲ့ ကန့်သတ်ပစ္စည်းတွေ တင်ပို့ရောင်းဝယ်မှုတွေကို ဟန့်တားဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့လဲ လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။”
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဇွန်လထဲမှာ မြောက်ကိုရီးယား ကမ်နန် သင်္ဘော မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးတည်ပြီး သွားနေတာမို့ အမေရိကန် တိုက်ရေယာဉ် USS John McCain က နောက်က ထပ်ချပ်မခွာ လိုက်ပြီး စောင့်ကြည့်ခဲ့တာမို့ သင်္ဘောဟာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို ဆက်မသွားဘဲ မြောက်ကိုရီးယားကို ပြန်လှည့်သွားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်အနေနဲ့ အခုလို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း သေသေချာချာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် ဒေသတွင်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေမယ့် လုပ်ရပ်တွေကို စောင့်ကြည့်ခဲ့သလို သင့်လျော်တဲ့ အရေးယူမှုတွေ လုပ်ဆောင် သွားဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
“မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေရော။ အခြား ဒေသတွေ အတွက်ပါ အန္တရာယ် ရှိစေပါတယ်။ ပစ္စည်းအတုတွေကို တင်ပို့တာ၊ တရားမ၀င် ပစ္စည်းတွေ ရောင်းချတာ၊ အန္တရာယ် ကြီးမားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို တင်ပို့မှုတွေ၊ ဒုံးလက်နက်တွေ နျူကလီးယား နည်းပညာတွေနဲ့ တခြား ငွေဝင်မယ့် ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ အန္တရာယ်တွေကို လျှော့ချဖို့ သင့်လျော်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကရော၊ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေကရော ဆက်လက် လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ တားမြစ်ချက်ကို လိုက်နာဖို့ လိုအပ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံကို မကြာခင်ကမှ လာရောက်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာ့တ်ကန့်မ်ဘဲလ် (Kurt Campbell) ကလည်း သတိပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူ ၇ ဦးပါအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာထဲမှာ မြောက်ကိုရီးယားက မြန်မာ၊ အီရန်နဲ့ ဆီးရီးယား နိုင်ငံတွေကို နျူကလီးယားနဲ့ ဒုံးကျည် ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာ အကူအညီတွေ ပေးနေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့တာဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ နျူကလီးယား လက်နက်ပိုင်ဆိုင်အောင် ကြိုးစားနေမှုကို အတည်ပြုပေးခဲ့တာလို့ NCGUB အဝေးရောက် ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ခံ ဒေါက်တာသောင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
“နအဖက နျူကလီယာစီမံကိန်းတခုကို အကောင်အထည်ဖေါ်နေတယ်။ ရုရှားကနေ ရီအက်တာ (Reactor) ဓါတ်ပေါင်းဖို မရောက်သေး ပေမဲ့လို့ မန္တလေးရဲ့မြောက်ဖက် သပိတ်ကျဉ်းနားမှာ ရီအက်တာထားဖို့ စက်ရုံရော နောက် ယူရေနီယံကို ထပ်ပြီးတော့ ပလူတိုနီယံအဆင့် ရောက်အောင်လုပ်တ စမ်းသပ်မှုတွေကို လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ၊ တချို့စမ်းသပ်မှုတွေမှာလည်း အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာမှာ ရေဒီယို ဓါတ်ကြွမှုတွေနဲ့ ဆေးရုံတင်ကုသရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ရနေတယ်ပေါ့နော်။
"နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲ ဂျပန်မှာ ဒုံးပျံနဲ့ဆိုင်တဲ့ မက်ဂနိုမီတာပေါ့လေ။ သံလိုက်ဓါတ် တိုင်းတာမှုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပို့လို့ ဂျပန်အစိုးရက ဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း သိကြပြီးသားပါ။ အထဲမှာလည်းပဲ နအဖအနေနဲ့ ဒုံးပျံတပ်ရင်းတို့ နျူကလီယာတပ်ရင်းတို့ စတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်တာတွေကို ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ ဆိုတော့ ဒီလုံခြုံရေး ကောင်စီက မြောက်ကိုရီးယား စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Sanction ကောင်မီတီကနေပြီးတော့ မြောက်ကိုရီးယားကနေ ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုတင်ပို့နေတဲ့ အထဲ မြန်မာနိုင်ငံ ပါတယ်ဆိုတာကို သူတို့ အတည်ပြု လိုက်တာပါပဲ။”
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုလို လုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် အရေးယူမှုတွေအပြင် နိုင်ငံတကာကစစ်ဆေးမှုတွေကို ပိုပြီး ခံလာရနိုင်တယ်လို့လဲ ပြောပါတယ်။
“အရေးယူမှုဆိုတာကတော့ အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော် သတိပေးတာတွေ၊ ရှုံ့ချတာတွေ၊ ကျန်တာကတော့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ လိုက်နာမှု ပေါ်မှာ တည်တာပေါ့နော်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ IAEA နိုင်ငံတကာ နျူကလီယား အေဂျင်စီကနေ နျူကလီယားမပြန့်ပွားရေး ဆိုင်ရာ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ နိုင်ငံပါ။ ဆိုတော့ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ နိုင်ငံတခုအနေနဲ့ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နျူကလီယားနဲ့ ဒုံးကျည် နည်းပညာပိုင်း စမ်းသပ်မှုတွေ ပိုပြီးတော့ စစ်ဆေးခံရမယ့် သဘောတွေ ရှိပါတယ်။”
အဝေးရောက် ညွန့်ပေါင်း အစိုးရ ရဲ့ ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ခံ ဒေါက်တာသောင်းထွန်း က ပြောသွားတာပါ။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 11:17 AM0comments
Al Jazeera news - Moustache Brothers Myanmar
ကိုပါပါလေး တို့ သုံးဦးကို လေးစားလျက်ရှိပါကြောင်း
Posted by အာဇာနည် at 9:10 AM0comments
မှောင်သောည တွေ ( ကာတွန်း ကို ဟန်လေး)
written by ko myo, May 26, 2010
ဲပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတယ် ဆိုတာသိတောင် သိကြ ပါ့မလား။
ပုံထဲကအတိုင်း အေးဆေး ကဲနေတော့မယ် --- မြန်မာစီပွားရေး ထိပ်တန်းလုပ်ငန်းရှင်မျာက-- နောက်ဆုံးပေါ် ကျည်ကာ၊ဒုံးခွင်း --မြေပါလျှိူး- မိုးပါပျံလို့ ရတဲ့ ကားအကြီး ကြီးတစ်စီး၊ဆု ချမယ်တဲ့။
မီးစက်ရောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကလဲ အောက်မှာ အားရပါးရ အားပေးနေ ကြလေရဲ့။
Posted by အာဇာနည် at 9:06 AM0comments
Burmese people won't forget 1990 may election result and the truth lie.
(05-27) 08:06 PDT YANGON, Myanmar (AP) --
Read more: http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2010/05/27/international/i080645D66.DTL#ixzz0pKD4Jfnn
Posted by အာဇာနည် at 6:00 AM0comments
Inapersonal handwritten letter to Burmese opposition leader Suu Kyi,
Inapersonal handwritten letter to Burmese opposition leader Suu Kyi, Gordon Brown wrote:
“This is one of the last letters I write as Prime Minister and I want it to be to you, to champion your cause for democracy in Burma and to say I will do everything I can to support you. You are, for me, what courage is and I wil...l fight for you to be free and your people [to be] free.”
Posted by အာဇာနည် at 5:51 AM0comments
မျှဝေပါတယ် ကြည့်ဖြစ်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ကောင်းမွန်တဲ့ တင်ပြချက်ပါ။
Posted by အာဇာနည် at 7:29 PM0comments
Posted by အာဇာနည် at 7:08 PM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓာတ်ပုံဖြန့်သူ ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ်တိုး
ဖနိဒါ | သောကြာနေ့၊ မေလ ၂၈ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၂၉ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓာတ်ပုံဖြန့်ဝေ၍ ထောင်ကျနေသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် လူငယ်တဦးကို နောက်ထပ် ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ် ထပ်မံတိုးလိုက်ရာ စုစုပေါင်း ၁၄ နှစ်ခွဲ ဖြစ်သွားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း အကျဉ်းထောင်များတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၁၀၀ ကျော်ရှိသည့်အနက် ”၂ဝဝ၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချခံရသူ အကုန်လုံးလို” မှာ အီလက်ထရောနစ် အက်ဥပဒေဖြင့် စွဲဆို ထောင်ချခံရသည်ဟု ထိုင်းအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (အေအေပီပီ) မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးတိတ်နိုင်က ပြောသည်။
“တရားသူကြီးဖတ်ပြတာက အီးမေးကို အသုံးပြုပြီးတော့ တဖက်က တရားမဝင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး သတင်းပို့တယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောတယ်” ဟု တရားခွင်သို့ တက်ရောက်နားထောင်ခဲ့သော ကိုမျိုးသန်းထက်က ပြောသည်။ သို့သော်လည်း မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်ကို တရားသူကြီးက ရည်ညွှန်းသွားခြင်းမရှိဟု သိရသည်။ Rest of your post
Posted by အာဇာနည် at 6:52 PM0comments
မင်းတို့တည်ထောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ Web Portal ကို လာလည်ပါဦးဆိုလို့ ငါလာသွားတယ်။
ဒါပေမယ့် ဝင်ဝင်ချင်းပဲ Home Page မှာရေးထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်ကို တွေ့တာနဲ့ ငါလှည့်ပြန်ခဲ့တယ်ကွာ။ မင်းတို့ရဲ့
“နိုင်ငံရေးလုံးဝမရေးရ” ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်ကြီးလေ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး
ဆွေးနွေးချင်လို့ ငါ ဒီစာလေးရေးလိုက်တာပါ သူငယ်ချင်းရေ။
ဒီလိုရေးထားတာကိုတွေ့တော့ ငါ ခံစားမိလိုက်တာက မင်းတို့ဟာ အဲဒီ
“နိုင်ငံရေး” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အတိအကျ နားမလည်နိုင်သေးဘူး ဆိုတာပါပဲ။
ငါသိသလောက်တော့ မင်းတို့ပြောချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုတာတွေက အစိုးရကို
ဝေဖန်တာ၊ အတိုက်အခံကို ထောက်ခံတာ၊ ပါတီထောင်တာ၊ ဆန္ဒပြတာတွေကို
ဆိုလိုတာမဟုတ်လား။ ဒါဆိုလည်း နိုင်ငံရေးမရေးရ ဆိုတဲ့နေရာမှာ
အစိုးရကိုမဝေဖန်ရ လို့ပဲရေးသင့်တာပေါ့ကွာ။ တကယ်တော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ
နိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရေးကိစ္စ၊ တတိုင်းပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့
လုပ်ရမယ့် အရေးကိစ္စတွေကိုခေါ်တဲ့ နိုင်ငံ့အရေး ကိုပြောတာပါသူငယ်ချင်းရေ။
အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့၊ အတိုက်အခံကို အားပေးဖို့ဆိုတာထက် ကိုယ်ပါဝင်နိုင်တဲ့
နေရာတစ်ခုကနေ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး အကျိုးရှိမယ့် နိုင်ငံ့အရေးကို
တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ကြရလိမ့်မယ်၊ ပြောကြရလိမ့်မယ်၊ နောက်ပြီး
လူတွေက ဒီမိုကရေစီ လိုချင်တယ်၊ ဒီမိုကရေစီရရင် ချမ်းသာပြီ၊ လူစဉ်မီပြီလို့
ထင်နေကြတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးတွေ အပြည့်အဝရလာတာနဲ့ မနက်ဖြန်တော့ ထိုင်း၊
စင်္ကာပူကိုမီပြီ၊ သန်ဘက်ခါတော့ ဂျပန်ကိုမီပြီ၊ နောက်တစ်ရက်ကျ
အမေရိကန်ကိုမီမယ်လို့ ယုံကြည်နေကြတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဆင်းရဲနေတဲ့
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေ အများကြီးဆိုတာ သတိထားမိစေချင်တယ်ကွာ။ ငါတို့
အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးပေါ့။
ဒီနေ့အစိုးရပြောင်း၊ နောက်နေ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ ကြေညာတာနဲ့
ငါတို့နိုင်ငံ နတ်ရေကန်ထဲကျသလို ဖြစ်မလာသေးပါဘူး။ ငါတို့ မြန်မာလည်း
ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလို ဖြစ်ချင်လား၊
ဂျပန်လိုဖြစ်ချင်လား။ ဒါ ငါတို့ရွေးရလိမ့် သူငယ်ချင်း။ ဒီမိုကရေစီကို
မင်းလည်းလိုချင်တယ်၊ ငါလည်းချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူများတွေလို ပါတီထဲလည်း
မပါရဲဘူး။ လမ်းပေါ်လည်း မထွက်ရဲဘူးမဟုတ်လား။ ဒီတော့ ငါတို့တွေလုပ်သင့်တာက
အစိုးရအပြောင်းအလဲကို ရည်ညွှန်းတာမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံရေးပဲ သူငယ်ချင်း။
ဒီလိုပြောလို့ ငါတာဝန်မဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်။ တာဝန်ခွဲယူတာပါ။ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ
အစိုးရကို အတိုက်အခံလုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေဟာ လက်ဆယ်ချောင်း ဘယ်ကမလဲ။
သံဃာတွေချည်းပဲကိုက ၂ ဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့၊ ကျောင်းသားအဖွဲ့ကချည်းပဲ ၅ ဖွဲ့လောက်၊
ပြည်ပရောက် အစိုးရက ၂ ဖွဲ့လောက်၊ ပြည်တွင်းမှာ UG ဆန်ဆန်လုပ်နေကြတာက ၅
ဖွဲ့လောက်၊ လက်နက်ကိုင်ထားတာ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းဆိုတာတွေနဲ့
ပေါင်းလိုက်ရင် ... သူငယ်ချင်းရေ - တနေ့နေ့များ ဒီမိုကရေစီရခဲ့ရင်
အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ် ပြန်ပေါင်းထုပ်နိုင်ကြပါတော့မလားပဲ။ ကဲ ဒီလူတွေက
အစိုးရပြောင်းဖို့၊ စနစ်ပြောင်းဖို့ လုပ်နေကြပြီဆိုတော့ ငါတို့ကလည်း
ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က လုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးကို လုပ်ကြရလိမ့်မယ်။
ပြည်တွင်းက နာမည်ကြီးမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုက အယ်ဒီတာချုပ်တစ်ယောက်ပြောတာလေး သတိရတယ်။
လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ခွင့်မရသေးခင်မှာ လုပ်သင့်တာလုပ်ကြရတယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့်
လုပ်နိုင်တာလည်း လုပ်ထားကြရမယ်တဲ့လေ။ သူငယ်ချင်း ငါတို့
ဘာလုပ်ထားနိုင်မလဲ။ ဒီမိုကရေစီရလာရင် အဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင် ငါတို့
ဘာတွေပြင်ဆင်ထားကြမလဲ။ ငါတော့ အဲဒီနိုင်ငံရေး လုပ်ချင်တယ်ကွာ။
ငါတို့တွေ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ တစ်ဦးချင်းလုပ်ထားနိုင်တာတွေမှာ
လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စည်းကမ်းနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ပြန်ကောင်းမွန်လာအောင်၊
အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှုတွေကို အားမပေးမိအောင်၊ အားကစား၊ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး
ဆုတ်ယုတ်နေမှုတွေကို ပြန်တိုးတက်လာအောင် တဘက်တလမ်းက ဝင်ကူကြဖို့တွေဟာ
ထိပ်ဆုံးက ဦးစားပေးရမယ့် အလုပ်တွေပေါ့သူငယ်ချင်း။ ဒါတွေဟာ ဒီမိုကရေစီမှ
မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ ဘယ်စနစ်၊ ဘယ်တိုင်းပြည်အတွက်မဆို လိုအပ်လှတဲ့
အခြေခံအုတ်မြစ် စစ်စစ်တွေပါပဲ။ စိတ်မကောင်းစရာက ငါတို့နိုင်ငံမှာ ဒါတွေဟာ
သူငယ်ချင်း - မင်း သတိထားမိလားတော့ မသိဘူး။ ငါတို့နိုင်ငံမှာက လူတွေကို
စည်းကမ်းလိုက်နာစေချင်ရင် ဒဏ်ငွေကောက်တဲ့ နည်းလမ်းကို သုံးတယ်နော်။
တိတိကျကျလိုက်ပြီး ဒဏ်ငွေကောက်နိုင်သလားဆိုတော့ မကောက်နိုင်ပါဘူး။
ဒဏ်ငွေတွေ၊ ထောင်ဒဏ်တွေနဲ့သာ ခြိမ်းခြောက်နေတာ - ဘာဖြစ်လို့
ဒီစည်းကမ်းတစ်ခုခုကို လူတွေ လိုက်နာသင့်သလဲ ဆိုတာမျိုးကို တာဝန်ရှိသူတွေက
လူတွေနားဝင်အောင်တော့ ဘယ်တုန်းကမှ ရှင်းမပြခဲ့ဘူး။ မလုပ်နဲ့ လုပ်ရင်
ဒဏ်ငွေဆိုတာပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ ကြေညာနေတာမဟုတ်လား။ ဒီတော့ လူလစ်ရင်၊
စောင့်ဖမ်းမယ့်လူ မရှိရင် လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်လာကြရော။
ဒီလိုစည်းကမ်းဖောက်လိုက်လို့ ဘာအကျိုးအပြစ်တွေ ဖြစ်လာသလဲ မတွေးကြတော့ဘူးလေ။
ဥပမာ - အစိုးရရုံး အဆောက်အဦးက လှေခါးကွေ့လေးတွေမှာ ကွမ်းတံတွေးတွေ
ထွေးကြတယ်။ မထွေးရ၊ ဒဏ်ငွေ ဆိုတာကြီးလည်း ရေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုံးကလူကလည်း
ထွေးတယ်။ အလုပ်ကိစ္စလာတဲ့ အပြင်လူကလည်း ထွေးတယ်။ အဖမ်းခံရတဲ့
လူရှိတယ်လို့လည်း တခါမှ မကြားမိပါဘူးကွာ။ တကယ်တော့ ဒဏ်ငွေတွေ ဘာတွေ
ရေးနေစရာကို မလိုပါဘူး။ အဆောက်အဦးရဲ့ လှေခါးထစ်ဟာ ကွမ်းတံတွေး
ထွေးရမယ့်နေရာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိနေတာပဲ မဟုတ်လား။ အဲဒီလို
စည်းကမ်းမဲ့ တံတွေးထွေးတဲ့ လူတွေဟာ သူတို့အိမ်က အိမ်ထောင့်လေးတွေ၊
အဝတ်ဘီရိုနားတွေ၊ သောက်ရေအိုးစဉ်နားတွေမှာရော ကွမ်းတံတွေး
ထွေးနေကြမယ်ထင်လား။ မလုပ်ပါဘူး သူငယ်ချင်းရေ။ ကိုယ့်အိမ်လေကွာ။
ကိုယ့်အိမ်ညစ်ပတ်မှာ၊ ရောဂါပိုးမွှားရှိလာမှာ၊ အမြင်မတော် စိုးရိမ်တယ်လေ။
လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စည်းကမ်းနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ အဲဒါပါပဲ။ ဒါလေးက
သိပ်သေးလွန်းတဲ့ ဥပမာပါ။ ငါတို့ဟာ သမိုင်းကြောင်းကောင်းတဲ့နိုင်ငံ၊
ယဉ်ကျေးမှုမြင့်မားတဲ့နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံကြီးသားတွေ နေတဲ့နိုင်ငံဆို
ဘယ်အစိုးရပဲ အုပ်ချုပ်နေပါစေ - လူတစ်ဦးချင်းစီဟာ အောက်တန်းကျတဲ့ စိတ်ညစ်တွေ
ရှိမနေသင့်ဘူး။ ဒါဟာ ပညာမတတ်တာနဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး။ သူတို့မှာ
ပင်ကိုရှိပြီးသား အသိဥာဏ်တစ်ခုပါပဲ။ နည်းနည်းလောက် သတိပြန်ပေးလိုက်တာနဲ့
စီးပွားရေးချွတ်ခြုံကျမှုရဲ့ အကျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ ငွေကို
ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုရဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့အချိန်မှာ လာဘ်ပေး၊
လာဘ်ယူဇာတ်လမ်းတွေဟာလည်း ပေါများသထက် ပေါများလာဦးမှာပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့
အခက်အခဲ တစ်ခုကို ကူညီနိုင်ပါရဲ့နဲ့ တရားမဝင် လာဘ်ငွေပေးမှ
လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ဟာ သိပ်စိတ်ပျက်စရာပါပဲ။ မရှိလို့
အကြံအဖန်တောင်းစားရတယ်ဆိုတာကို နားလည်ပေးနိုင်ပေမယ့် ဒါဟာ သူလုပ်ပေးရမယ့်
တာဝန်တစ်ခု (Responsibility) ဖြစ်ပြီး တဘက်လူရဲ့ အခက်အခဲကိုလည်း
ကြည့်ရမယ်မဟုတ်လား။ ဒီတော့ ခုနပြောတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်လာတဲ့အခါ
လာဘ်စားမှုတွေလည်း လျော့ပါးလာမယ်လို့ ငါတော့ယုံတယ်သူငယ်ချင်း။
သူငယ်ချင်းရေ - ပြောလက်စနဲ့ ဆက်ပြောဦးမယ်ကွာ။ ငါတို့နိုင်ငံမှာ
အားကစားအကြောင်းပြောကြဟေ့ဆို “တချိန်က” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ
ဗဟာဒူးတို့ကဘယ်လို၊ ရှင်ဗွေဂန်း၊ မီတုန်းနော်ကဘယ်လိုဆိုပြီး အတိတ်ကို
စလွမ်းကြရတော့တာပဲ။ ပညာရေးဆိုလည်း “အရင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာ
အရှေ့တောင်အာရှမှာ...” ဆိုပြီး ပြန်တမ်းတကြရပြန်တော့ပဲမဟုတ်လား။
သူငယ်ချင်းရေ - ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အားကစားပဲဖြစ်ဖြစ် တနိုင်ငံလုံး
အတိုင်းအတာနဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်ရောက်အောင်တော့ ငါတို့ဟာ အစိုးရအကူအညီမပါဘဲ
မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အစိုးရလုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီး စောင့်နေတာထက်
ငါတို့တွေအနေနဲ့ ကလေးနဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးကို ဘယ်လိုများ
ထောက်ပံ့အားပေးနိုင်မလဲဆိုတာ နည်းလမ်းရှာထားသင့်တယ်။ မင်းတို့လို IT
ပညာရှင်တွေက အလယ်တန်းအဆင့်လောက် ကျောင်းသားတွေကစပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့
အင်တာနက်ကို မိတ်ဆက်ပေးကြမယ်၊ အားကစားမှာ ထွန်းပေါက်တဲ့လူတွေကလည်း
ကျောင်းသားတွေကစလို့ အားကစားအခြေခံလေးတွေကို ကိုယ်ကျိုးမရှာဘဲ သင်ပေးကြမယ်၊
အကြားအမြင်ဗဟုသုတရှိတဲ့ ပညာတတ်တွေကလည်း ဟောပြောပွဲတွေလုပ်လို့ ကလေးနဲ့
လူငယ်တွေကို လိမ္မာလာအောင်၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြင့်မားလာအောင် နားချကြမယ်ဆို
ငါတို့ဟာ ငါတို့လုပ်နိုင်တဲ့ တာဝန်တစ်ခုကို ကျေပွန်အောင်
လုပ်နိုင်ကြပြီလို့ ခံယူရမှာပါပဲကွာ။ ဒီလူငယ်တွေကို ဒီမိုကရေစီတွေ၊
စစ်အစိုးရတွေ ဘာမှ မသင်ပေးပါနဲ့ဦး။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ချစ်တတ်အောင်၊
မနက်တိုင်း ရွတ်ဆိုနေတဲ့ ကမ္ဘာမကြေသီချင်းဟာ ဘာအတွက်ဆိုကြရတယ်ဆိုတာသိအောင်၊
ယူနီဖောင်းဘာလို့ ဝတ်ကြတယ်ဆိုတာလောက်ပဲ အရင်သိအောင် လုပ်ပေးနိုင်ရင်ပဲ
တော်လှပါပြီ။ ဒီကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေဟာ ငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့
သူငယ်ချင်းရေ - မိချောင်းမင်း ရေကင်းပြသလိုများ ဖြစ်နေသလားကွာ။ ငါအပေါ်မှာ
ရေးထားခဲ့တာတွေဟာ နိုင်ငံရေးတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် ငါ အစိုးရဖြုတ်ချဖို့၊
ဆန္ဒပြဖို့ တစ်လုံးမှ မရေးထားဘူးနော်။ ဒီလိုနိုင်ငံရေးမျိုး
ငါတို့လုပ်ကြရမယ်သူငယ်ချင်း။ ရေးကြရမယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဆွေးနွေးကြရမယ်။
ငါတို့အနာဂတ်ဟာ အစိုးရပြောင်းမှပဲ တောက်ပလာမယ်ဆိုတာကို ခေါင်းထဲက
ခဏထုတ်လို့ အဖြစ်နိုင်ဆုံးနည်းလမ်းတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကူညီကြရမယ်။
ငါတို့တောင့်တတဲ့ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားလာတဲ့အခါ ငါတို့ပြည်သူတွေဟာ
ဒီမိုကရေစီနဲ့အညီ နေထိုင်တတ်တဲ့ ပြည်သူတွေ ဖြစ်နေမယ်ဆို
ဘယ်လောက်ကောင်းလိမ့်မလဲကွာ။ ကြားဖူးတဲ့ ဆိုရိုးစကားလေး တစ်ခုရှိတယ်။
တိုင်းပြည်တစ်ခုကပြည်သူတွေဟာ သူတို့နဲ့တန်တဲ့ အစိုးရပဲ ရတတ်တယ်တဲ့။
ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းလာတဲ့အခါ ငါတို့အစိုးရလည်း မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေ
ဖြစ်လာမှာပေါ့။ မကောင်းတဲ့လူတွေ ဘေးဖယ်သွားကြရပါလိမ့်မယ်။
မင်းလည်း မြန်မာ၊ ငါလည်း မြန်မာ - မြန်မာတွေ ဖြစ်ပါရက်နဲ့
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို မရေးရ၊ စိတ်မဝင်စားရဆိုတော့ - သူငယ်ချင်း
မင်းတို့လုပ်ထားတဲ့ Portal က ဘယ်သူတွေ အတွက်တုန်း။ ငါပြောတာတွေ
မင်းနားလည်မယ်ဆို နိုင်ငံရေးလုပ်ကြစမ်းပါလို့ မင်းသူငယ်ချင်းတွေကို
ထပ်ပြောပေးပါကွာ။ သိပ်နောက်မကျခင် နိုင်ငံရေးလုပ်ကြစို့လို့။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လည်း နိုင်ငံတကာကို ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မယ်
ကျွန်တော်တို့လည်း နောက်မကျသေးခင် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးကို
နိုင်ငံရေးကို စိတ်မ၀င်စားသူသည် နတ်သော်လည်းကောင်း၊ နွားသော်လည်းကောင်း
ဖြစ်ရမည်၊ လူမဖြစ်နိုင်။ (သခင်ဘသောင်း)
All the best!Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 4:34 PM 1 comments
ရှေးက မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ အလံဟာ “ကဒေါင်းပုံ” ဖြစ်ပါတယ်။ “ကဒေါင်း”ဆိုတာ အမြီးဖြန့်ကားပြီး ကနေတဲ့ဒေါင်းပေါ့။ ကဒေါင်းကို “နေ” ကယူပါတယ်။ “နေ”ထဲမှာ ဒေါင်းပုံ ပါရှိပြီး “လ” ထဲမှာ “ယုန်” ပုံ ပါရှိတယ်လို့ ဗမာ့ရိုးရာ အယူအဆ ရှိပါတယ်။ ၀ံသာနုခေတ်မှာ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းက “ဒေါင်းဋီကာ” “ဒေါင်ဂဏ္ဌိ” စတဲ့ “ဒေါင်း” အဖွင့် စာပေတွေ ပြုစုလို့ အမျိုးသားကျောင်းတွေမှာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၀ံသာနုခေတ်လို့ ခြုံငုံပြီးခေါ်တဲ့ခေတ်မှာ အရေးပါတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက ဗမာပြည်တ၀န်းရှိ ၀ံသာနု ၀ိုင်အမ်မ်ဘီအေ အသင်းတွေကို စုစည်းထားတဲ့ ဂျီစီဘီအေ အသင်းချုပ်ကြီးပါ။
ခုခေတ်ဟာ ဒီမိုကရေစီရေး တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ ခေတ်ပါ။ ဒုတိယ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲခေတ်ပါ။ တိုက်ပွဲဝင်ဆဲကာလ ဖြစ်လို့ တိုက်ပွဲ အထိမ်းအမှတ် ခွပ်ဒေါင်းဟာ အလွန့်အလွန် အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး အလေးအနက် ထားရပါလိမ့်မယ်။
မေ ၂၆၊ ၂၀၁၀Rest of your post
ဖဒိုမန်းရှာ သမီးဖြစ်သူ ကမ္ဘာ့လူငယ်ခေါင်းဆောင် ဆုရှင် ဇိုရာဖန် နှင့် ဗီအိုအေ အင်တာဗျူး
Posted by အာဇာနည် at 9:08 AM0comments
ယခုလေးလပတ် အစည်းအဝေးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေတို့ ဘာတွေ ကြံစည်နေကြသလဲ
လောလောဆယ်မှာတော့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ အားလုံးဟာ ညစဉ်ညတိုင်း အစည်းအဝေးတွေ ပြုလုပ်နေသလို ယခု လေးလပတ် အစည်းအဝေး ကိုလည်း မကြာမီကလေးတင်ကမှ ကျင်းပပြီးဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း စစ်ဘက်နီးစပ်သူများမှ စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား ၀က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ သတင်းပေးပို့လာပါတယ်။
ယခုကျင်းပတဲ့ လေးလပတ် အစည်းအဝေးမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ခေါင်းစဉ်များကတော့ နိုင်ငံရေးအပိုင်းတွင် မကြာခင် မြန်မာနိုင်ငံကို လာတော့မယ့် အမေရိကန် အထက် လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်ဝက်ဘ်ရဲ့ မြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယား အဆက် အသွယ်ဖြတ်ရေးအတွက် နအဖဟာ “ဘာနဲ့” အပေးအယူလုပ် ဆွေးနွေးကြမယ်၊ အလားတူ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင် မလာခင် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များအား မဟာဗျူဟာနဲ့နည်းဗျူဟာ ချမှတ် ကိုင်တွယ်နိုင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရုတ်ကို ဘယ်လိုတင်ပြမယ်၊ လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်ပြု ခံနိုင်ရေးအတွက် အမေရိကန်အား စည်းရုံး ကြိုးပမ်းလို့ မရရင်တောင် အီးယူ ဥရောပအဖွဲ့အနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုပေးနိုင်ရေးအတွက် ဘယ်လိုစည်းရုံးသွားကြမယ်၊ အဲဒီလို စည်းရုံးသွားနိုင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အခြေအနေထိန်းနိုင်မဲ့ ကာလတစ်ခုမှာ ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ်အား လျှော့ပေါ့ပေးကာ ရုတ်တရက် လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာနဲ့ အပေးအယူ ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်း တာဝန်ပေးမယ့် အရာရှိတွေကိစ္စနဲ့ ယူနီဖောင်းချွတ်ကြံ့ဖွတ်ပါတီ ထောင်တဲ့ကိစ္စ စတာတွေကို ဆွေးနွေး ညွန်ကြားချက် ပေးခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
ဒ့ါအပြင် ပြည်သုံးပြည်ဖြစ်တဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး (ခေါ်) ကြံ့ဖွတ်သို့ စစ်တပ်မှ အရာရှိများ သွတ်သွင်းနိုင်ဖို့ ပြောင်းရွှေ့မှုတွေကို စတင်တော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရန်မလိုဘဲ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း တာဝန်ပေးမယ့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ စာရင်းကိုလည်း မကြာခင်မှာ အမိန့် ထွက်လာရန်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အတိုက်အခံ အင်အားကြီးပါတီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အပါ အဝင် တိုင်းရင်းသားပါတီကြီးများ အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်တော့တဲ့အတွက် နအဖအဖို့ အသက်ရှု ချောင်စရာတော့ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်မှာ ပြည်သူလူထု ထောက်ခံမှုကို မရနိုင်မှန်း ကိုယ့်အခြေအနေကို ကိုယ်သိနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တစ်စုဟာ အားရ တင်းတိမ်နိုင်မှု မရှိသေးဘဲ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရုံတင်မက လွှတ်တော်များတွင် စိတ်ကြိုက် အာဏာချုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ အပူတပြင်း စီစဉ်နေပါတော့တယ်။
Posted by အာဇာနည် at 8:57 AM0comments
Get out SPDC ,shame on you ruling without supporting people.
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 8:45 AM0comments
အာဏာရူးများ၊ အာဏာအတွက် လည့်လည် လှုပ်ရှား
May 28, 2010 ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးမည့် လူဦးရေစာရင်းများ ကောက်ခံ ရိုးမ ၃။ ၂၈၊ ၅၊ ၂၀၁၀
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးရန်အတွက် လူဦးရေ စာရင်းများ အတိကျ လိုက်လံကောက်ခံနေလျှက်ရှိကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
ယခုလ (၂၅) ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ယနေ့အထိ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်အားလုံးတွင် အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီး သူတိုင်း ပုံစံ(၁၀) ဖြင့် တိုက်ကြည့်ကာ စာရင်းကောက်ခံနေခြင်း ဖြစ်သည်။
“သူတို့ လာရောက်စာရင်း ယူတဲ့စာရွက် ခေါင်းစဉ်မှာ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်း နည်းဥပဒေ ၄ (က) ဆိုပြီး ပါတယ်၊ အောက်မှာရေးထားတဲ့ လက်မှတ်က ဥက္ကဌ ကျေးရွာ/ရပ်ကွက် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဆိုပြီး ရေးထားတယ်”ဟု ပြောသည်။
ရပ်ကွက်တွင်းရှိ မိသားစုအလိုက် လူဦးရေ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲ အိမ်ထောင်စု ပုံစံ (၁၀)ကို ရယက ဥက္ကဌ ကောက်ခံပြီး အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်သူများကို ကောက်ခံနေခြင်းဖြစ်သည်။
မုံရွာမြို့ပေါ်တွင် ယခင်က ရပ်ကွက်ပေါင်း ၁၄ ရပ်ကွက်သာရှိသော်လည်း ယခုအခါ ရပ်ကွက်များထပ်မံ တိုးချဲ့ထားသည့်အတွက် ၂၅ ရပ်ကွက်အထိ ရှိပြီး စာရင်းလာကောက်သူများက ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အခြားပြင်ဆင်မှုများလည်း ပြုလုပ်နေကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာမြို့နယ်တွင်လည်း ပြီးခဲ့သည့် လပိုင်းကတည်းက လူဦးရေးစာရင်းများ ကောက်ခံနေလျှက်ရှိပြီး ပဲခူးတိုင်းအတွင်း မြို့နယ်အချို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကဒ်များကို အခကြေးငွေယူကာ လိုက်လံ လုပ်ပေးနေလျှက်ရှိသည်။Rest of your post
Posted by အာဇာနည် at 7:18 AM0comments
လေလွင့်သူ များနှင့် တောင်းရမ်းသူ များကို မန္တလေးမြို့ပေါ် တွင် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း
မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိ လမ်းများနှင့် ဘုရား ပရဝဏ် များတွင် လေလွင့် လူငယ်များ၊ တောင်းရမ်း စားသောက် သူများ ပပျောက် စေရန် ယခုလ ၅ ရက်နေ့က မဟာမုနိ ဘုရားကြီး ပရဝဏ်ရှိ တောင်းရမ်းသူ များကို မန္တလေး မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီက ဖမ်းဆီး အရေးယူ ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဘုရားကြီး ပရဝဏ်မှ ဖမ်းဆီး ထ်ိန်းသိမ်း ထားသူ များတွင် အမျိုးသမီး ၈ ဦး၊ အမျိုးသား ၁၉ ဦးနှင့် ကလေးငယ် ၇ ဦး ပါဝင်ပြီး ဈေးများ နှင့် ဆေးရုံ အနီး တစ်ဝိုက်တွင် နေထိုင် သူများကို စောင့်ဆိုင်း ဖမ်းဆီး ထားသူ အားလုံးစုစုပေါင်း ၆၅ ဦး အထိ ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထား သူများထဲမှ ကလေးငယ် များအား သာသနာ့ဘောင် ဝင်လိုလျှင် ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကာ ကျန်းမာ သန်စွမ်းသော အမျိုးသား များအား စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီက အလုပ် အကိုင် ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ကလေးငယ်တွေကို သာသနာ့ဘောင် ဝင်ချင်ရင် ဝင်နိုင်အောင် ဆရာတော် တစ်ပါးက အလှူခံ ထားပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ကောင်းတဲ့ အမျိုးသားတွေ အလုပ်လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင် မြို့တော်စည်ပင်မှာ သင့်တော်တဲ့ အလုပ်ပေးဖို့ ရှိပါတယ်။ အနာကြီး ရောဂါသည် တွေကိုတော့ ရေနံ့သာ ဆေးရုံကို ပြန်ပို့ဖို့ စီစဉ် ထားပါတယ် ” ဟု မန္တလေး မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်ပုက ဟံသာဝတီ သို့ ပြောပြပါသည်။Rest of your post
ကျက်သရေ မရှိတဲ့ မိစ္ဆာ
လူ့ ပြည်ကမကြာမှီ ထွက်ခွာပါတော့မယ်။
သိက္ခာမရှိတဲ့ငမိုက်သား
လူ့ပြည်မှာ အလကားနေခဲ့ ။
မိုက်မဲတဲ့ နာမည်နဲ့ သေသွားမယ့်သူ။
Black list အမဲရောင်မှောင်တဲ့ 
ဂုဏ်ရောင်မပြောင် စာရင်း အသွင်းခံထားရတဲ့ သတ္တ၀ါ
ဖိနပ်စောင့် နေတဲ့ အပြုံး
Posted by အာဇာနည် at 6:49 AM0comments
၀မ်းသာရမှာလား၊ ၀မ်းနည်းရမှာလား၊ မလေးရှား UNHCR
မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ Chinese Assembly Hall တွင် UNHCR မှ မြန်မာ ဒုက္ခသည်အဖွဲ့အစည်းများကို တွေ့ဆုံ၍ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မြန်မာဒုက္ခသည်များ တရားဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိရေးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
UNHCR ၏ Community Development Unit (CDU) အနေနှင့် မလေးရှားရောက် UNHCR ကဒ်ရထားသူ မြန် မာဒုက္ခသည်များအတွက် တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိစေရန် မလေးရှားအာဏာပိုင်များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေး နွေးနေကြောင်းနှင့် ရလဒ်ကောင်းတွေရလာနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ CDU မှ မြန်မာဒုက္ခသည်အဖွဲ့အစည်း များကို ပြောကြားရာတွင် UNHCR ကဒ်ရရှိထားပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ အလုပ်မဲ့နေသူ ဒုက္ခသည်များ၏ နာမည်၊ စာရင်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာနေရာ၊ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ စသည့်အချက်များပါသည့် စာရင်းကို UNHCR သို့ပေးပို့ပေးကြရန် ပါဝင်သည်။
UNHCR ၏ မြန်မာဒုက္ခသည်များ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးအတွက် ကူညီဆောက်ရွက်ပေးမှုသည် ကောင်းမွန်သော အစီအစဉ်ဖြစ်ပေမယ့် မလေးရှား uNHCR အရာရှိတစ်ချို့ အထူးသဖြင့် Registration Unit ၏ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု များကြောင့် အခက်အခဲ အကန့်အသတ်များရှိနေသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ မြန်မာဒုက္ခသည်များအစည်းအရုံး(BRO) ဥက္ကဌ ဦးမောင်လှက အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားရာတွင် “ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးအတွက် UNHCR မှ ယခုလို ကူညီဆောင်ရွက်နေခြင်းသည် ၀မ်းသာ စရာကောင်းသည်။ သို့သော် UNHCR ကဒ်ရရှိထားသူများအတွက်သာဖြစ်နေပြီး ဒုက္ခသည်ဖြစ်ထိုက်ပေမယ့် UNHCR Registration တွင် နာမည်စာရင်းသွင်းဖို့တောင် အခွင့်အရေး မရကြသော မြန်မာဒုက္ခသည်များအဖို့ အင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းနေပါတယ် ” ဟု ပြောဆိုသွားသည်။
မလေးရှား UNHCR ၏ ခွဲခြားဆက်ဆံနေမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ ဦးမောင်လှက “ ယခုအခါ မလေးရှား UNHCR အရာ ရှိတစ်ချို့၏ မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းအပေါ် သွေးခွဲနေခြင်း၊ ခွဲခြားဆက်ဆံနေမှုများသည် လုံးဝလက်ခံနိုင်ဖွယ် မရှိကြောင်းနှင့် ဗမာလူမျိုးအပါအ၀င် အချို့မြန်မာအဖွဲ့အစည်းများမှာ UNHCR ကဒ်ရဖို့ဝေးစွ၊ Registration လုပ်ခွင့်မရသည်မှာ ၃ နှစ်ကျော်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါဟာ လုံးဝ မတရားသက်သက် ဖိနှိပ်၊ အနိုင်ကျင့်တာ ဖြစ် ကြောင်း ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့သည်။
UNHCR အနေနဲ့ မလေးအာဏာပိုင်များ နှင့် ဆွေးနွေး၍ တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးရင်တောင်မှ UNHCR ကဒ်မရသေးသော မြန်မာဒုက္ခသည်များမှာ ဘာအခွင့်အရေးမှ မရသည့်အပြင် မလေးအာဏာပိုင်များ၏ အတင်း အကြပ်ဖမ်းဆီးထောင်ချ အပြစ်ပေးခြင်းကို ပိုမိုခံရနိုင်ဖွယ်ရှိနေသည်ဟု စိုးရိမ်မှုများလည်းရှိသည်။ ထို့ပြင် ဒုက္ခ သည်ချင်းအတူတူ UNHCR ကဒ်ရရှိထားသူများ နှင့် UNHCR ကဒ်မရသေးသောသူများကြား ကွာဟချက်လည်း အလွန်ကြီးများသွားမည်။
ဒီလိုမြန်မာဒုက္ခသည်အချင်းချင်းမညီမျှမှုတွေ၊ စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေဖြစ်ရတာဟာ မလေးရှား UNHCR အရာရှိတစ် ချို့ရဲ့ မတရားခွဲခြားမှုကြောင့်ဘဲဖြစ်တယ်။ မလေးရှား အစိုးရက လူသားချင်းစာနာလို့ တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြု လာရင်တောင်မှ မလေးရှား UNHCR အရာရှိတစ်ချို့ရဲ့ နှစ်ရှည်လများ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် UNHCR ကဒ်ရထားတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကျတော့ အလုပ်အကိုင်တွေရစေ၊ သူတို့ UNHCR ကဒ်မပေးတဲ့ ဗ မာလူမျိုးတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကျတော့ ထောင်ကျစေ သ ဘောဖြစ်နေပြီ။
မလေးရှား UNHCR က ဗမာလူမျိုး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားနေသူ ဗမာတွေကို UNHCR စာရင်းပေးသွင်းခွင့်မရတာ နှစ်အတော်ကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့ UNHCR အရာရှိတွေကဆိုရင် “ မင်းတို့ကဗမာ၊ အစိုးရကလည်းဗမာ၊ မင်းတို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ၊ အစိုးရဟာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာအစိုးရ၊ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ မင်းတို့ကို အစိုးရက မနှိပ်စက်ဘူး၊ မင်းတို့အနေနဲ့ အချိန်မရွေးပြန်သွားလို့ရတယ် ” လို့ ပြောတာတွေရှိပါတယ်။ ဒီလို ယုတ္တိမရှိတဲ့ ပြောကြားမှုတွေနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ကျနော့်မှာ အထောက်အထားတွေရှိပါတယ် ” ဟု BRO ဥက္ကဌ ဦမောင်လှက ဆိုသည်။
အစည်းအဝေးတွင် CDU မှ တာဝန်ရှိသူများက မိမိတို့အနေနဲ့ UNHCR Registration Unit နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် မြန်မာဒုက္ခသည်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများကို အလေးထားပါကြောင်း ပြော ကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အဖွဲ့အစည်းများမှ မိမိတို့၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ရောက်ရှိရာနေရာ၊ အ လုပ်ရှိလျှင် အလုပ်၏လိပ်စာ စသည့်အချက်အလက်များပါသော စာရင်းကို ပို့ပေးပါရန်လည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မလေးရှား UNHCR ၏ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ယုံကြည်မှုအပေါ် အလွဲသုံးစား၊ အနိုင်ကျင့်တတ်ပုံနှင့်ပတ်သတ်၍ BRO ဥက္ကဌ ဦးမောင်လှက ယခုလိုပြောပြခဲ့သည်။
“ ကျနော်တို့အနေနဲ့ UNHCR ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုလေးစားပြီး မလေးရှား UNHCR ရဲ့ Registration Unit က ယခု လိုဘဲ ကျနော်တို့ မြန်မာဒုက္ခသည်များအစည်းအရုံး(BRO) အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ နာမည်၊ လိပ်စာ၊ ရောက်ရှိရာနေရာ၊ မလေးရှားရောက်သည့်နှစ်၊ အိမ်ထောင်ရှိ/မရှိ အစရှိသဖြင့် အချက်အလက်များပါတဲ့ စာရင်းကို ၂၀၁၀ ဖေဖော် ၀ါရီလဆန်းပိုင်းနောက်ဆုံးထားပို့ပေးရန် အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ UNHCR ပြောတဲ့အတိုင်း ကျနော်တို့ အချိန်မီ ပို့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေကို UNHCR စာရင်းသွင်းပြုလုပ်ပေးမယ်လို့လည်း ကတိပေးခဲ့တယ်။
BRO အနေနဲ့လည်း UNHCR ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားတာကြောင့် သူတို့ပေးထားတဲ့ ကတိကိုယုံကြည်ခဲ့မိ တယ်။ သို့သော် အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိ မျှော်လင့်နေခဲ့သော်လည်း ဘာမှအကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိတာ ကြောင့် ကျနော်ကိုယ်တိုင်သွားရောက် စုံစမ်းမေးမြန်းတဲ့အခါ UNHCR အရာရှိရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်ဟာ လုံးဝကို အံ့ အားသင့် တုန်လှုပ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
UNHCR Registration အရာရှိက “ ငါတို့မင်းတို့အဖွဲ့ဝင်စာရင်းကို မလေးရှား Immigration(လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေး) ဌာနကို ပေးပို့ထားတယ်လို့ ” ကျနော့်ကိုပြောတယ်။ UNHCR လိုအဖွဲ့အစည်းမှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ်လျှောက် ထားသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကို ပေးပို့လိုက်တာဟာ ဗမာလူမျိုး ဒုက္ခသည်တွေ သက်သက်ဖမ်းဆီးထောင်ချစေဖို့ တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်နေသလိုဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ ယုံ ကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်လိုက်တာလေ။
အခုလည်း မလေးရှား UNHCR ရဲ့ စီမံကိန်းတွေဟာ UNHCR ဒုက္ခသည်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်မရတဲ့ ကျနော်တို့ BRO အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ အခြား UNHCR ရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံ၊ ဖိနှိပ်၊ အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက်တော့ “ ၀မ်းသာရမှာလား၊ ၀မ်းနည်းရမှာလား၊ မလေးရှား UNHCR ရယ် ” လို့ဘဲ မေးရမလိုဖြစ်နေပါတော့တယ်ဗျာ။ ”
ပေးပို့ပေးသူ - ခမိခဆဲ http://kamikaze-2010.blogspot.com
Posted by HRmyanmar at 1:29 AM 1 comments
အာဇာနည် ဘလော့ခ်မှ ဒီဇိုင်းကိုမျိုးနှင့် စက်တင်ဘာ ...
ပြည်သူတွေ ကိုယ့်ကိစ္စကို ပြသနာ ဖြေရှင်းနေသော်လည်း အ...
ကျွန်တော့လက်ထဲရောက်လာလို့ဓါတ်ပုံအမြန်ရိုက်ပြီး အ...
၀ါးရင်းတုတ်နှင့် ထိုက်တန်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ချက်...
ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးတခုခုဖြစ်ဖို့ အတွက် ပလပ်စတစ်...
ဆရာတော်တရား အင်တာနက်ပေါ်မှာ တိုက်ရိုက် တရားနာလိုလျင...
UN experts say NKorea is exporting nuke technology...
ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြပါ ( သူခိုးနဲ့ဂျပိုး တိတ်တိတ်ပု...
Inapersonal handwritten letter to Burmese opposi...
မျှဝေပါတယ် ကြည့်ဖြစ်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ကောင...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓာတ်ပုံဖြန့်သူ ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ်...
ဖဒိုမန်းရှာ သမီးဖြစ်သူ ကမ္ဘာ့လူငယ်ခေါင်းဆောင် ဆုရှင...
ယခုလေးလပတ် အစည်းအဝေးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ...
Get out SPDC ,shame on you ruling without supporti...
လေလွင့်သူ များနှင့် တောင်းရမ်းသူ များကို မန္တလေးမြိ...
သိက္ခာမဲ့ အုပ်စုကြောင့် ကျွန်တော်လည်းအရှက်ရပြီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ် နောက်ဆုံ...
ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ပေးမည့်သူများရဲ့ ပြည်သူ့ အပေါ်ထာ...
ဘိန်းဘုရင်နှင့် ဆက်စပ်သော Transocean ကုမ္ပဏီ မြန်မာ...
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို RCSS အသိအမှတ်ပြုထောက်ခံ
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကန့်ကွက်မှု ပြုလု...
ပူးတွဲ စစ်ဆင်နွဲရန် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့ သဘောတူ...
ယောက်ျား ၀ယ်..ရော်ကြေးနဲ့ဖယ်တတ်သော မင်းသမီး
Joint Statement No.7/2010 of ABMA+88+ABFSU
ဟိုဘက်ကမ်းက မီးထိန်ထိန်ပေမဲ့ ဒို့ ဖက်ကမ်းကျ မီးမှိ...
မရည်ရွယ်ပါဘူး တိုက်ဆိုင်ခဲ့ လို့ 
ငါ့မှာ လေယာဉ်ခ ရှိတယ် ငှဲ..ငှဲ
မှန်တဲ့သူတို့ အမြင်
ညုကောင်းသူ အနိုင်ရစေ...အပြုစု ကောင်းသူ..ဒို့ ကိုကြ...
Myanmar's flag mistaken as Taiwan's in Okinawa
လှတယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုင်းတော့ဘယ် လို လ...
ထပ်ဆင်ချင်န၀ပ် ကို ဖမ်းချုပ်ရန်နှင့် အကြမ်းဖက်သမား...
ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲ ကြံ့ ဖွတ် သိန်းမောင်?
လာဘ်လာဘအပြင် ဟောဒါကလေးပါ အဆစ်ယူ
မြန်မာတွေ ဝဲပေါက်ဖို့ဘဲ ကျန်တော့တယ်
The Voice Weekly ဂျာနယ် Vol.6/No.27 ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြ...
မင်္ဂလာဈေး မီးလောင်မှုတွင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၅ ဦး ဒ...
စေတနာလက် အဖွဲ့ မှ နယ်သို့ ဆင်းပြီး ရေအလှုဒါနပြုတ...
မီးသတင်း ( ဗမာသွေး )မှ တဆင့်ပို့ လာသဖြင့် ကျေးဇူး။...
မင်္ဂလာဈေး မီးလောင်နေစဉ် ဗီဒီယိုကလစ်
ယနေ့ သခင် စိုးမြင့် အသုဘ ဈာပန ပုံများ နှင့် ဗီဒီယ...
The Voice Journal -6-28
နေပြည်တော် မဟုတ်တဲ့ ကျီးနဲ့ ဖုတ်ဖုတ် သေပြည်တော်
မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာလူငယ် လေးဦး ခြိမ်းခြော...
တရားဝင်ခွင့်မပြုရင်..တရားမ၀င် မယားတွေ ဖြစ်ကုန်တာပေ...
သူဘဲယုံတယ် ကျန်တာတွေ မင်းခွေးချေး..
မြောက်ကိုးရီးယားက မိန်းကလေးတွေရဲ့ တန်ဖိုး
သန်းရွှေတို့ လို သေနတ်အားကိုးပြီး မိုက်ရဲတဲ့ သတ္တိက...
သန်းရွှေတို့ လောက် အသိတရာခေါင်းပါးတဲ့အုပ်စုဗမာပြည...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ တိုင်းရင်းသားပြည်သူ အားထားရာ
နဲနဲတော့ရွေ့ ဖို့ လိုသည်။ (တပြည်လုံး)
သူများကြွေးတိုင်း မစားနဲ့ 
Rain alert with eye on path
စစ်သား ငါးသိန်းရှိပြီး ဆည်က တစ်သောင်း..ရအောင်တည်မဲ...
ကဲကြည့် ကုလားကမှ အမျိုးချစ်သေးတယ်.
လိုင်လာဆိုင်ကလုန်း မြန်မာကမ်းရိုးတန်းဖက် ပြန်လှည့်...
ဥပဒေအရ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်။ ဟန်ပြ ရုံးချိန်းပြမနေနဲ...
ပြည်သူ့ အနူပညာရှင် ဦးသုမောင်၏ နှုတ်ဆက်ကြေကွဲ ဈာပ...